That's so good, right?: April 2012
လိင်တံထိပ်ဖျားမှ အရေပြားကို ဖြတ်တောက်ခြင်း Circumcision ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက အမျိုးသားဦးရေရဲ့ ၅ပုံ ၁ပုံခန့် ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အများစုကတော့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ၊ ဒါမှမဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အရ ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပြီး မွေးကင်းစကလေးမှ လူပျို ဖော်ဝင်ခါနီးအရွယ်အတွင်းမှာပြုလုပ်တာများပါတယ်။ လူကြီးများကတော့ ကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက် Circumcision လုပ်တာက ပိုများ ပါတယ်။
လိင်တံထိပ်ဖျားက အရေပြားလေးနောက်ကိုဆွဲလှန်လို့ မရခြင်း(ငုံခြင်း)ကို တစ်နှစ်သားယောက်ျားလေးများရဲ့ ၅၀ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆယ်နှစ် သားယောက်ျားလေးရဲ့ ၅ရာခိုင်နှုန်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ ရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းသာ ငုံခြင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Circumcision လုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်က ငုံခြင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်မို့မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်တွေကတော့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကြောင့်မှသည် နောက်ဖြစ်လာမယ့်ရောဂါများ ကာကွယ်ဖို့၊ ဘာသာရေးအယူအဆ စသည်တို့ ဖြစ် ပါတယ်။
လိင်တံထိပ်ဖျား အရေပြားအ၀ကျဉ်းခြင်းကြောင့် နောက်သို့ဆွဲလှန်လို့မရခြင်းကို Phimosis လို့ခေါ်ပြီး ၁၇နှစ်အရွယ် ယောက်ျား လေးများရဲ့ ၁ရာခိုင်နှုန်း - ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာတွေ့ရတယ်။ လက္ခဏာရပ်တွေက လိင်တံထိပ်အရေပြား အနေရအထိုင်ရခက်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း(အထူးသဖြင့် လိင်ဆက်ဆံစဉ်နှင့် Masturbation ပြုလုပ်စဉ်)၊ ဆီးသွားစဉ် တင်းကျပ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ လိင်ထံထိပ် ဖျားအရေပြားအပေါက်ဝ အရမ်းကျဉ်းလွန်းလျှင် ဆီးစွန့်ထုတ်၍မရခြင်း။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ Circumcision ပြုလုပ်ဖို့ အကြံ ဉာဏ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
လိင်တံထိပ်ဖျား အရေပြား နီရဲပြီးရောင်ရမ်းကာ လိင်တံနှင့် လိင်တံအရေပြားအကြားမှာ အဖြူရောင်အဖတ်များတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ Balanoposthitis ဟာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိတဲ့ လက္ခဏာလည်း ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုနောက်ကွယ်က ရောဂါမရှိရင် တော့ ရိုးရိုးလေးပဲ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်ခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအပျော့စားများပေးခြင်း၊ လိင်တံအရေပြားကို ထိ တွေ့ကိုင်တွယ်မှုရှောင်ရှားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရုံနှင့် ရပါတယ်။ အဲဒီလိုအဖြစ်မျိုး မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်ပြန်ဖြစ်ရင်သာ Circumcision ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
လိင်တံကင်ဆာဟာ အလွန်အဖြစ်နည်းပါးတဲ့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်တယ်။ ကလေးဘ၀မှာ Circumcision ပြုလုပ်ထားရင် လိင်တံကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပြမှုအချို့ရှိပေမယ့် လူကြီးဘ၀မှာပြုလုပ်ရင်တော့ မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ လိင်တံကြွက်နို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းစသည်တို့ဟာလည်း လိင်တံကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်း တွေဖြစ်တယ်။ လိင်တံအရေပြားဖြတ်ထားတဲ့သူဟာ ဖြတ်မထားတဲ့သူထက် လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် Circumcision လုပ်ခြင်းဟာ Penile Cancer လိင်တံကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။
ဆစ်ဖလစ်၊ ရှန်ကာ၊ရေယုန်စတဲ့ လိင်အင်္ဂါမှာ အနာဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေဟာ Circumcision လုပ်မထားတဲ့သူတွေမှာ ပိုများတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂနိုရောဂါနဲ့ ဂနိုကြောင့်မဟုတ်တဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်းတွေကတော့ Circumcision လုပ် ထားသူတွေမှာ ပိုတွေ့ရပါတယ်။ Yeast Infection ကတော့ ဖြတ်ထားတဲ့ရော ဖြတ်မထားတဲ့သူမှာပါ အတူတူတွေ့ရပါတယ်။ ဒီရောဂါတွေ ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကို ကာကွယ်ဖို့ ကွန်ဒုံးသုံးခြင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချရသော လိင်မှုကိစ္စအလေ့အထများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သာ ကာကွယ်နိုင်ပြီး STDs ရောဂါများကို ကာကွယ်ဖို့ Circumcision ကိုထောက်ခံချက်ပေး၍ မရနိုင်ပါ။
Circumcision ပြုလုပ်ခြင်းဟာ HIV ကူးစက်မှုကိုဟန့်တားမှုပြုတဲ့အခါကူညီပေးနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုလည်း အငြင်းပွားနေပါတယ်။ လက်ရှိ သက်သေပြချက်တွေအရတော့ Circumcision ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် HIV ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုနှေးကွေးနိုင်စေတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပြုမှုဟာ လုံလောက်မှုမရှိသေးပါဘူး။ အလားတူပင် Cervical Cancer ကို Circumcision လုပ်ခြင်းဖြင့် လျှော့ချနိုင်ကြောင်း လုံလောက်သည့် သက်သေ ပြချက်များ မရှိသေးပါ။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်သည့်ရောဂါ Urinary Tract Infection (UTI) ဟာ Circumcision လုပ်ထား တဲ့လူနာများမှာ ၁၀ဆခန့်ပိုနည်းပါးတယ်ဆိုပေမယ့် UTI ဟာ ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါမဟုတ်တဲ့အတွက် လုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်း ပြချက် မဟုတ်ပါ။
အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် Judaism ဘာသာဝင် အမျိုးသားများဟာ ဘာသာရေးအရ Circumcision ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ လိင်တံကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အရေပြား Foreskin ဟာ အချည်းနှီးတည်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံစဉ် လိင်ထံထိပ် အရေပြား ပွတ်တိုက်မှု အတိုး၊ အလျှော့လုပ်တဲ့အခါ ကောင်းမွန်တဲ့ ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဆေးရုံတက်စရာမလိုတဲ့ ခွဲစိတ်မှုအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲရှုပ်ထွေးမှုလည်း နည်းပါးပါတယ်။ တချို့မှာတော့ လိင်တံ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်း၊ လိင်တံ၏ ထိတွေ့ခံစားမှု Sensation လျော့ပါးသွားခြင်း၊ အမာရွတ်က နာ ကျင်ခြင်းစသည်တို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Credit: Health Digest Journal – Vol. (9), No.23 (25-4-2012)
Posted by Alex Aung at 9:51 PM No comments:
'ဒီကောင်လေးက အရမ်း Cute ဖြစ်တာပဲ'တဲ့ မကြာခဏအပြော ခံရတာကိုကြားရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီး ကျွန်တော် က ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားနေမယ်မထင်ပါနဲ့။ ပိုပြီးရှိုးထုတ်ပြလိမ့်မယ်လို့ လည်းမယူဆကြပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လည်းဆို ကျွန်တော်က အရှက် သည်းတတ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါဗျ။ ကျောင်း သွားလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ သင်တန်းသွားလို့ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက် က ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်နေပြီဆိုရင် ခြေလှမ်းတွေမှား ကုန်တော့မတတ်ပါပဲ။ အကယ်၍များ ကောင်မလေးတွေက မထိ တထိလှမ်းစရင် ကျွန်တော်ထူပူပြီး သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကို သဲသဲကွဲကွဲ မကြားတော့။ အတော်တော့အခက်တွေ့နေပါပြီ။
ကျွန်တော် ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရောက်လာတာ တစ်လလောက်ပဲရှိ သေးတဲ့ မြို့သားအသစ်လေး တစ်ယောက်ပါ။ ကျောင်း တွေဖွင့် နေကြပြီဗျ ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တော့။ ဒါကြောင့် ကျောင်းကို အ မှီအပ်ပြီး စာလိုက်နိုင်အောင် ကြိုးစားရပါတယ်။ အခု ဒယ်ဒီက သူ တာဝန်ကျရာ ဆေးရုံကြီးကို ပုံမှန်သွား၊ မာမီကလည်း သူ့စီးပွားအ ကွက်အကွင်းချဲ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့တာ။ မာမီက အချက်အပြုတ် ကောင်းကောင်းကျွမ်းတာ၊ အရင်မြို့မှာတုန်းက စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ပြီး လှုပ်ရှားခဲ့တာများ ဒယ်ဒီ့ ၀င်ငွေလောက်တော့အပျော့ပေါ့။
ဆရာဝန်ကြီးတွေအတွက် ပေးတဲ့ အိမ်ကအတော်ကြီးပါတယ်။ ခြံဝင်းထဲမှာလည်း စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့။ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး က တော့ အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ တရုတ်စကားပင်တန်း နှင့် မြတ်လေးပန်း ရုံတွေ။ လသာတဲ့ည ၀ရန်တာထွက်ပြီး ရပ်နေလိုက်လို့ကတော့ လေအလာမှာမွှေးကြိုင်နေတာ။ ကျွန်တော့်အခန်းကလည်း ဘေး အစွန်ကအခန်းဆိုတော့ ၀ရန်တာကျယ် ကျယ်နဲ့ တဆက်တည်း။ ဟီး... နောက်ဖေးကြောင်လိမ်လှေကားနဲ့လည်းနီးတော့ ညဘက် အခွေသွားငှားလို့ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အလည်လွန်ပြီး နောက်ကျရင် အဆင်ပြေတယ်ဗျ။
အိမ်ရဲ့ဘေးမှာလည်း ခြံကျယ်ကြီးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာအများ အပြားပါ။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ဘေးကတိုက်ကြီးကလည်း ဟီးလို့။ အိမ်အပြင်အဆင်ကလည်းမိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလည်း အဲဒီလိုပြင်ဆင်ဖို့ မာမီ့ကိုပြောရဦးမှာအသေအချာပဲ။
'ဟင်' ကျွန်တော်အတော်ရှက်သွားမိပါတယ်။ ကျွန်တော်လွတ် လွတ်လပ်လပ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာကို တစ်ဖက်အိမ်က ကောင်လေးတစ်ယောက်က သေသေချာချာ ပြတင်းပေါက်က နေကြည့်နေတာဗျ။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ လူရည်သန့်တဲ့ အသွင် အပြင် အပြည့်။ ကျွန်တော့်အသက်လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ အရပ်နည်းနည်းပုတဲ့ပုံ။
ဘာကြောင့်သိလည်းဆို ကျွန်တော့် အရပ် က ၆ပေ၂လက်မရှည်ပြီး ပိန်သွယ်သူမို့ပါ။ အဖေကရှမ်း၊ အမေက ထိုင်းလူမျိုးဆိုတော့ သူတို့ မျက်လုံး မျက်ခုံးနဲ့ အရပ်က စိတ်တိုင်း ကျပေါ့။ လူတွေကြားထဲသွားရင် ထင်းကနဲဖြစ်နေတာကိုတော့ မနှစ်မြို့မိပါဘူး။
ကျွန်တော့်အထင် လူတွေကျွန်တော့်စကားပြောတဲ့အခါ ပိုပြီးအာ ရုံစိုက်စရာဖြစ်သွားတတ်ကြတယ် ထင်တယ် အသံလေ ယူလေ သိမ်းခပ်ဝဲ၀ဲကြောင့်လေ။ ပြီးတော့ ပန်းသွေးရောင်ထနေ တဲ့မျက် နှာ မည်းနက် နေတဲ့မျက်ခုံးမွေး ရှည်လျားတဲ့မျက် တောင်များ ကြောင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်သွားကြသေး တာ။
ကျွန်တော့်ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်လေးတွေ ပြောကြတာကတော့ သူတို့ကျွန်တော်စကားပြောသံကို စတင်ကြားရခါစက တစ်မျိုး ပဲဆိုပြီး ရယ်မောမိကြသေးသတဲ့။ ထားပါတော့ ကျွန်တော်က တာချီလိတ်မှာမွေးခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုပြောင်း ရွှေ့ခဲ့ရတာ ဒယ်ဒီ့ကြောင့်ပါပဲ။ ဒီကိုမိသားစုတစ်စုလုံးပြောင်းရွှေ့လာတာ အားလုံးပေါင်းမှ သုံးယောက်ထဲ။
ကျောင်းစဖွင့်တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ သုံးလေးပတ်လောက် တော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကျောင်းအသစ် နေရာသစ်ဆိုတော့ သူ ငယ်ချင်းအသစ်တွေမရသေးတော့ တစ်ယောက်ထဲငေါင်တောင် တောင်။ အပြင်လောကက သူငယ်ချင်းရှာမယ်ဆိုရင် လည်းအ ထာကျဖို့အတော်ခက်တယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကြောင့် ကျွန်တော် အင်တာနက်ကို အမြဲဖွင့်ဖြစ်နေတော့တာ သူငယ်ချင်းရှာဖို့ မိတ် ဆွေတိုးဖို့လေ။ အရင်ဆုံး IM Program တွေသုံးပြီး သူတို့နှင့် စကားပြောတယ် ရင်းနှီးအောင်လုပ် တယ် ကျွန်တော့်ရုပ်ရည်ကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ သူတို့ကိုကျွန်တော့်အကြောင်း၊ ရောထွေးနေတဲ့ နေထိုင်မှုသဘာဝ စတာတွေပြောပြီးမှ Web-cam ကိုဖွင့် ကျွန်တော့်ရုပ်ရည်အစစ် အမှန်ကိုမြင်စေပေါ့။
'မင်းပြောတော့ အရပ်သိပ်မရှည်ဘူးဆို၊ မျက်လုံးတွေက ၀ိုင်းစက် စက်နဲ့ အတော်ကြည့်ကောင်းတာ၊ ဒါပေမဲ့ မင်းပြုံးတာက လည်း အေးအေးစက်စက်နဲ့' စတဲ့စကားတွေကို ပုံမှန်ကြားရပါတယ်။ ပြီး တော့ ကျွန်တော့်ဆံပင် အကောက်တွေကို အရောင်ဆိုးထားတာ လို့ထင်နေကြတယ်။ ကျွန်တော့်ငယ်နာမည်က ဆံနီလေ။ ဆံပင် လေးတွေက အနက်ရောင်မဟုတ်ပဲ အနီရောင်ဘက်သန်းတဲ့ အညိုဖြစ်နေတာကြောင့်ပေါ့။ အဖေက အသားဖြူပြီး ဆံပင်က အညိုရောင်နဲ့ လူချောဗျ။
နေ့စဉ်သာမန်အကြောင်းတွေ စကားပြောကြတယ်၊ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း သတင်းပလင်းအစုံ၊ နောက်များမှာတော့ လိင်ကိစ္စ အကြောင်းတွေပါထည့်ပြောမိကြရင်း ကျွန်တော့်အတွက် အဦးဆုံး cyber-sex အတွေ့ အကြုံကိုရခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီအတွေ့ အကြုံကို အခုပုံမှန်ပြောမိနေတဲ့ လားရှိုးကတစ်ယောက်နဲ့ စတင်ခဲ့ မိတာပါပဲ။ နာမည်က စိုင်းစံထွန်းတဲ့လေ။ ကျွန်တော်က ကိုမဖွင့် သေးဘဲ စကားပြောနေမိပေမဲ့ သူကတော့ သူ့မျက်နှာကို ကတစ် ဆင့်ပြပြီးပါပြီ။
သူဟာ Gay ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမလိုအောင် သူ ပြောတဲ့စကားလုံးတွေက သိသာပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သူ ပြောတဲ့စကား ၊ အသံတွေကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ turn-on ကို ဖြစ်လို့ပါ။ ကိုထွန်းက အသက်တစ်နှစ်ကြီးတယ် ကျွန်တော့် ထက်။ ကြည့်လို့အလွန်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း တက်ဖြစ်လို့ sign in လုပ်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် 'Hey, ငါ့ကောင် ဒီနေ့ရောဘယ်လိုလည်း အိုကေလား' ဆိုတဲ့စကားစုနဲ့ စတင် တော့တာပါ။
တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် သူ့မျက်နှာ၊ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၊သူ့ လှုပ်ရှားမှု တွေကို သူဖွင့်ပြတဲ့ Web-cam ကနေတစ်ဆင့်မြင်ရ ပါတယ်။ ဘော်ဒီ အတော်လှတဲ့ ငနဲပါပဲ။ သူ့ဆံနွယ်တွေက မဟူရာရောင် တောက်နေသလို ဖြောင့်စင်းနေတာပဲ။ သူ့မျက်တောင်တွေက ညီညီ ညာညာနဲ့ မျက်ဝန်းတွေက ထင်ထင်ရှားရှား။ မျက်ခုံးမွှေး တွေကလည်း နှာယောင်နားမှာ ဆက်နေတာ။ တစ်ခါတစ်လေ chatting လုပ်နေရင်း တစ်ခုခုယူတာမျိုး၊ ခုံကိုရှေ့တိုးနှောက် ငင်လုပ်တာမျိုးတွေမှာ မတ်တပ်ရပ်တဲ့ အခါတွေမှာ ခုံးထနေတဲ့ သူ့ပေါင်ကြားကိုမြင်ရပါတော့တယ်။ အားကစားဘောင်းဘီလိုမျိုး အပျော့တွေ ၀တ်ဆင်တဲ့နေ့ တွေများ ပေါင်ကြားက ပစ္စတိုက ကျွန်တော့်ကိုချိန်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ဟူး...ရင်ထဲမှာ တဒိတ်ဒိတ်ပဲဗျာ။ သွေးတွေပူနွေးလာသလိုခံစား ရသလို စိတ်ထဲ ကတုန်ကယင်ဖြစ်လာသလိုပါ။ ဘာကြောင့် လည်းတော့မသိဘူး အဲဒီထက်ပိုပြီး မြင်ချင်တယ် ကြည့်ချင်လာ မိတယ်။
တစ်နေ့ ကျွန်တော်တို့ စကားပြောဖို့ sign in လုပ်လိုက်တော့ သူ လေ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်မထားတဲ့အပြင် ဘောင်းဘီ တိုနှင့်။ ပြီးတော့ သတိထားမိလိုက်တာက သူ့ဘယ်ဘက် နို့သီး ခေါင်းလေးမှာ စတီးကွင်းလေးတပ်ထားတာ ကိုပေါ့။ ကျွန်တော် လည်းတပ်ထားသေးတယ်။ မာမီတို့ဆူမှာစိုးလို့ မသိအောင်တော့ သတိထားရတာပေါ့။ အဲဒါလေးကို အကြောင်းပြု မေးရင်းပြုရင်း ကျွန်တော့်မှာလည်း ရှိကြောင်းသူသိသွားပြီး သူ့ကို Web-cam ကတစ်ဆင့်ပြဖြစ်ရပါတယ်။ သူ့ကိုမလိမ်ချင်တာလည်းပါသလို ကျွန်တော့်ဘော်ဒီကို သူ့ကိုပြဖို့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရ လိုက်တာပေါ့လေ။
Me: "Wow! ကိုထွန်းမှာ Tit ring တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လား၊ အစ်ကိုအဲဒီလိုတပ်ထားမှန်းသတိမထားမိဘူး"
Sai: "ဟုတ်တယ်၊တပ်ထားတာ တစ်နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီကွ"
Me: "Cool, ကျွန်တော်လည်း တပ်ထားတယ်ဗျ"
Sai: "Oh yeah? ငါကြည့်ချင်လိုက်တာကွာ"
Me: "Web-cam အသစ်တစ်ခုလောက်ယူလိုက်ဦးမယ်။ Sign-out ခဏလုပ်လိုက်ဦးမယ်။ ခဏနေပြန်ဝင်ပြီးမှ အစ်ကို့ကိုပြ မယ်လေနော်။
Sai: "စိတ်ရှည်ရမှာပေါ့လေ။ မင်းဘော်ဒီကိုကြည့်ချင်နေတာ ကြာ လှပြီသိလား ဟီးဟီး။မြန်မြန်သွား"
ပြောပြီးမှ စိတ်ထဲနည်းနည်းလန့်နေမိပါပြီ။ ကိုထွန်းနှင့်ကျွန်တော် chatting လုပ်တာ အချိန်ကာလတစ်ခုတိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အကြိမ် တော် တော်များများမှာ သူ့ကိုသာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့မြင်ခဲ့ရတာကများ ပါတယ်။ ကျွန် တော့်ကိုတော့ ဘယ်တုန်းကမှ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သူမမြင်ဖူးပါ ဘူး။ အခုတော့ နို့သီးခေါင်းလေးမှာ ring လေးတပ် ထားတာ ပါး စပ်ဆော့မိတော့ ပြရပါတော့မယ်။
ကင်မရာကိုတပ် IMကို Log in လုပ်ပြီးတော့ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ကျွန်တော့်ပုံရိပ်ကြည်ကြည်လင်လင်တွေကို သူ့ဆီထုတ် လွှင့်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဗိုက်ထဲကပဲနာသလိုလို ရင်ထဲကပဲတင်း ကျပ်နေသလိုလိုတော့ ခံစားရမိသားပါ။
'Hey, ငါအားလုံးမြင်ကြည့်ချင်တယ်ကွ၊ အခုဟာက ကုလားထိုင် ကိုပဲမြင်နေရတယ်' တဲ့ ကိုထွန်းကပြောတာများ စိတ်လှုပ်ရှားနေ သံကလှိုင်းထလို့။
'ကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျ၊ ခဏလေး ရှပ်အင်္ကျီချွတ်လိုက်ဦးမယ်။'
'တကယ်တော့ ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း မသိငြိမ် နေမိတာပါ။ သူဟာကျွန်တော့်မျက်နှာတစ် ၀က်လောက်က လွဲလို့ ဘယ်တုန်းကမှအပြည့်မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ကင်မရာရှေ့မှာ ထားရမှာ အလွန်ကြောက်ပါတယ်။'
'နောက်ဆုံးတော့ ကုလားထိုင်မှာ အသာထိုင်၊ ပြီးတော့ ဘာမှ မပြောဘဲ မျက်လုံးကို ပြတင်းပေါက်ဆီ လွှဲထားမိရပါတယ်။'
'Dude! You are hot!'ကိုထွန်းပါးစပ်က မထိန်းနိုင်စွာထွက်လာ ပါတော့တယ်။
'ငါက ၁၅၊၁၆ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေရတယ် အောင့်မေ့တော မင်းခန္ဓာကိုယ်က ထွားလှချည်လား'
ဟုတ်တော့ဟုတ်မယ် ကျွန်တော်က စကားပြောရင် မတိုးမကျယ် ပြောမိတဲ့အခါရှိသလို ရှက်တယ်လို့ ပြောမိတာ ခဏ ခဏဆို တော့။
'အင်တာနက်ထဲမှာပဲ မြင်ရတာလေ၊ကြားရတာလေကွာ။ မင်းနို့ သီးခေါင်းလေးမှာတပ်ထားတာ တယ်ကွကြည့်ရတာ။ စကားမစပ် မင်းကိုကြည့်ရတာ ရှမ်းအစစ်တော့ဟုတ်ပုံမရဘူး ထိုင်းကလူတွေ လိုပဲနော် အသားအရောင်က'
သူ့မှတ်ချက်ကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ၀မ်းသာမိရသလိုလို ကျေနပ်မိ သလိုလိုပါပဲ။ တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး သူ့အမြင်တစ် ခုခုကို ကြားလိုက်ရလို့ပါ။ ကျွန်တော်က ဖာသိဖာသာနေတတ်တယ် အ ၀တ်အစားဖက်ရှင် လည်း နောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ် ချင်နေ ဖြစ်ရင် ပြီးရောဝတ်တတ်တာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာပုံစံဖြစ်နေလည်း မသိ ဘဲ တစ်ခြားသူတွေထင်မြင်ချက်ပေးမှ ဂရိုစိုက်ကြည့်မိလေ သတည်းလေ။ ကျွန်တော်ဝတ်စားတာက အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်နေလို့ တော်ပါသေးရဲ့။
ကျွန်တော်တို့ အချိန်အတော်ကြာ စကားတွေပြောမိကြပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေထုံးစံအတိုင်း နည်းပညာ၊
ပစ္စည်း အသစ် အဆန်း၊ကောင်မလေးတွေအကြောင်း လိင်ကိစ္စအကြောင်း အပါ အ၀င်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ homosexual နဲ့ပတ်သက်တာ ကိုတော့ တစ် ခွန်းမှမဟဖြစ်ကြပါဘူး။
စကားပြောကြရင်း ကိုထွန်းက 'ငါ personal မေးခွန်းနည်းနည်း လောက်မေးချင်တယ်၊ မေးရမလား'လို့ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော် အသက်ပြင်းပြင်းရှူမိရရင်း ဒီထက်ပိုလာတော့မယ့်အနံ့တွေကို ရ လာပါတယ်။
'Sure, ကျွန်တော်တို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတဲ့ အရွယ် ရောက်ပြီပဲ'
'မင်း - တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ cybersex လုပ်ဖူးလား net ထဲ မှာလေ'
'တစ်ခါ၊ ဒါပေမဲ့ ကင်မရာလည်းမရှိ ဘာမှမရှိဘူး။ အစ်ကိုပြော တဲ့စကားတွေလိုမျိုး သူလည်းပြောတာ။
'ဟား ဟား....အခုမင်းကို ငါမြင်နေရပြီနော်။ မင်းအတွက် စားလို့ ကောင်းမယ့် ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးရှိတယ်ကွသိလား၊ စား မလား'
'Oh! အခု ကျွန်တော့်ကိုမြင်နေရတယ်?'
'အစ်ကိုပေးတဲ့ငှက်ပျောသီးက ကျွန်တော့်မှာလည်းရှိပြီးသား ဗျ။ကြာပဲကြာလှပြီ'
'Yeah, ဒါပေမဲ့ မှည့်နေတယ်မဟုတ်လား၊ ငါက၀မ်းပျင်းမှစားချင် တာကွ'
သူဘာပြောချင်တာလည်း ကျွန်တော်သိသလို သူလည်းရယ်ရယ် မောမောနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြောလာတယ်လေ။ ကျွန်တော် လည်း ပြောရင်းပြောရင်း သဘာဝငှက်ပျောသီးက မှည့်ရာကနေ ခပ်စိမ်းစိမ်းဖြစ်ဖို့ အရိပ်အယောင်ပြလာပါပြီ။ ကင်မရာရှေ့မှာ အ ၀တ်တွေချွတ်ဖို့ မရှက်မိတော့သလို အလိုလိုတတ်လာတဲ့စကား လုံးတွေလည်း ပါးစပ်ကနေပြောထွက် မိသည်ပေါ့။
သူမတ်တပ်ရပ်တဲ့ ခဏမှာရော ရေထသောက်တဲ့အချိန်မှာရော ခပ်ထွားထွား အထုပ်အထည်ကိုမြင်မိရကြောင်း သူ့ကို စကားမ စပ်ဖွင့်ပြောလိုက်မိတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမိရကြောင်းလည်းပါတာ ပေါ့။
Speedo ဘောင်းဘီ ပါးပါးလေးကို သူဝတ်ထားတာ သူ့ Rocket တံကြီးက ချက်ရှိရာကို အမြှောင်းလိုက်ညွှန်ပြနေတာကို မြင်ရပါ တယ်။ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ခေါင်းငြိမ့်ပြတာများ ဘောင်းဘီထဲက ခုန်ထွက်လာတော့မယ် မြင်ရတာများလေ။
ကင်မရာရှေ့က ခုံမှာထိုင်ရင်း ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွား ကလည်း သံချောင်းဖြစ်စပြုလာပါပြီ။ ကဲဘယ်လိုလည်း 'come on ...come on' တဲ့ ကင်မရာထဲကတစ်ဆင့် ကိုထွန်းကို ပြန် လည်နှိုးဆွတဲ့သဘောဖြစ်စေသည်ပေါ့။
ကျွန်တော့် ပေါင်ကြားက ဂြိုဟ်ကြွပြီး ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေပုံကို သူ့ကို အသာလှစ် ပြလိုက်တာ သူ့မျက်လုံးတွေ အရောင် တောက်လာသလို လျှာကို နှုတ်ခမ်းတွေဆီသပ်ပြတာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ လှပ်ကနဲဖြစ်ကရော။
'Loose the boxers!'
စိတ်ထဲမှာ သွေးထဲမှာ အဟုန်ပြင်းပြင်းအရာတစ်ခုမောင်းနှင်နေ သလိုပဲ။ လိင်ကိစ္စတစ်ခုထဲသာ အာရုံထဲရှိတော့တယ်။ ရှက်ရွှံ့ တဲ့ဖီလင်တွေမရှိတော့ဘဲ ရှေ့ဆက်သွားဖို့သာ....။
ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီက သားရေမျှော့ကြိုးကို တဖြည်းဖြည်း လျော့လိုက် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီး လက်ကလွှတ်လိုက်နဲ့ ဟို တစ်ဖက်က ကြည့်ရတာအားမလိုအားမရဖြစ်လာတဲ့ပုံပါပဲ။ သူကတော့ ဘောင်းဘီထဲလက်နှိုက် သူ့ညီလေးကို ဂုတ်ချိုး စပြုပါပြီ။
ဘောင်းဘီကို ရှောကနဲချွတ်လိုက်တော့ မျှော့ကြိုးက အလွတ် ကျွန်တော့်Rocketကြီးဟာ ထောင်းကနဲအပေါ်ကို တန်း ထောင် သွားတာ ပခြုပ်ထဲက မြွေဟောက်ကြီး ရုတ်တရက်ခေါင်း ထောင် ထလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်လေ။
ကိုထွန်းဆိုတဲ့ သူလည်း စကားလုံးတွေ မရွက်တော့သလို သူ့ကင် မရာကိုလည်း အောက်ပိုင်းကိုသာချိန်ထားလိုက်ပါတယ်။
စားပွဲခုံအံဆွဲထဲက KY Jelly ကိုယူ လက်ဖ၀ါးထဲများများထည့် ပေါင်ကြားက ငထွားကို ဂုတ်ကကိုင်ကာ ထုထောင်းမိပါ တော့ တယ်။ Head phone ကနေတစ်ဆင့်ကြားနေရတဲ့ အသက်ရှူသံ၊ လှိုက်မောသံ၊ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ တဖတ်ဖတ်အသံတို့ ကြောင့် ကျွန်တော်စိတ်ပိုလှုပ်ရှားရပါတယ်။
မျက်စိကိုအသာမှိတ်လိုက်တော့ အာရုံထဲမှာ ကိုထွန်းက ကျွန်တော့်ငပဲကိုသူ့လျှာလေးနဲ့ကလိလိုက် ငုံစုပ်လိုက်နဲ့။ အားရ စရာကြီးတဲ့ 'အ...အ...ရှီး'။ သူ့လက်တွေနဲ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုပ်ကိုင်ပြီးထုပေးတာဗျ...အား။ good!
'Baby...baby...I'm Cumming ...I'm Cumming...'
ကွန်ပျူတာ Scream ကိုကြည့်မိရာ ကိုထွန်းက သူ့လက်တွေကို အသားကုန်လှုပ်ရှားရင်း သူ့ရင်ဘတ်၊ ဘယ်လီကြွက်သား ၊ဆီးခုံ တို့မှာ အဖြူရောင်အနှစ်တွေကိုဖြန်းပက်လိုက်ရင်း အရင်ပြီးသွား ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို သန့်စင်ဖို့တဘက်ကို အသာ ထ အယူမှာ ကျွန်တော်ရှိရာဘက်ကို ပေးလိုက်တာ ရင်ကိုခုန်သွားရတာပ။ 'အ...အား...အ' ကျွန်တော်လည်းပဲ ဘောင်းဘီပေါ်ကို ပန်းထုတ် ပစ်လိုက်မိရပါပြီ များမကြာခင်မှာပေါ့။ တစ်စက်မကျန်အားရပါးရ ပန်းထုတ်ပစ်မိတာ တစ်ယောက်တည်းလုပ်တုန်းကနဲ့မတူ အရ သာရှိပေစွ။
'ငါတော့ အရမ်း good တာပဲကွာ'
'အကိုက ကောင်ငယ်လေးအကိုက်ခံရလို့ အော်တဲ့အတိုင်းပဲ ဟာ ဟ'
'အိုကေပါ၊ အဲဒါကအရေးမကြီးပါဘူး ဘာများကွာခြားသွားမှာမို့ လည်း'
ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်မေးမိပါတယ်။ ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်နဲ့ ရည်းစားဦးကို အပြင်မှာသွားတွေ့ရတော့မလိုဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြင့်ပေါ့။ သူရန်ကုန်မှာပဲ၊ ရန်ကုန်မှာပဲနေသတဲ့။
သူကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကို အဖြေမပေးဘဲ မေးခွန်းတွေထပ် ထုတ်ပါတယ်။
'မင်းမာမီက Black Grand Prix ကားကိုမောင်းလေ့ရှိတယ် မဟုတ်လား'
အိုး...အဲဒါကိုသူသိနေတယ်။ အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့ အံအားသင့်မှုပါပဲ ကျွန်တော့်အတွက်လေ။
'မင်းတို့အိမ်ကြီးက အဖြူရောင်နှစ်ထပ်အိမ်ကျယ်ကြီး ဟုတ်တယ် နော်'
'အိမ်နီးချင်းလေးကိုကြိုဆိုပါတယ်၊ မင်းတို့အိမ်ဘယ်ဘက်ဘေးက Orchid Villa တိုက်ကပါကွ'
ကိုထွန်းနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ဦးပိုင်းကာလတွေကစတင်လို့ ရန်ကုန် မှာ နေနေတဲ့အချိန်တစ်လျှောက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စကားစတင် ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရဲ့ မနီးမဝေးအိမ်ကလူဖြစ်နေတာပါပဲ။ ကျောင်းတွေစ တင်တက်ရပြီ ဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ညတိုင်းစကားပြော ဒါမှမဟုတ် cybersex လုပ်ဖို့ နှစ်ဦးသားအတွက် မလိုအပ် တော့ပါဘူး။
တစ်ခါတစ်ရံ နောက်ကျပြန်ရောက်တဲ့ ညတွေကိုဖြတ်သန်းရတဲ့ အခါ နှစ်ဦးလုံးအိပ်ယာထဲမှာပဲ နေဖို့ အာသီသရှိကြတယ်။ နောက် ပြီး chat ဒါမှမဟုတ် jack-off လုပ်ဖြစ်ကြတယ်လေ အင်တာနက် သုံးပြီးတော့ပေါ့။ များမကြာမီ အပြင်မှာတွေ့ ဖြစ်ကြတော့မယ် ထင်ရဲ့။
'ကဲ....သူငယ်ချင်းတို့ရော ဘယ် Internet buddy ကအကောင်း ဆုံး အသင့်တော်ဆုံးလည်း မင်းတို့အတွက်လေ?'
Written by Alex Aung
စာကြွင်း။ ။ နှစ်ကူးမှာပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်နော်….ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါပြီ။ အသစ်လေးတွေတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားရေးပါ့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ကတင်ပေးပါတောင်းဆိုထားတဲ့အဟောင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပေးပါရစေ။
Posted by Alex Aung at 9:36 AM No comments:
ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှာ အမြဲစိတ်ကူးယဉ်တောင့်တမိခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား ဒါမှမဟုတ် ခဏတာပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ဆုံချင် ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက် (ပြပွဲအခမ်းအနား၊ သစ်တစ်ပင်အောက်၊ chat room ထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် sauna တစ်ခုမှာ ဆုံခဲ့ရသောသူ) ကို အမှန်တကယ် ပတ်သက်ရ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ရင် ဘယ်လိုများ ပြုမူမိမှာပါလိမ့်။ တကယ်လို့များ လိင်ကိစ္စကို ကျေနပ်ဖွယ်ပတ်သက်မှု သူနဲ့ရရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် ရော စိတ်ထဲ ဘယ်လိုများ သဘောထားမိမှာပါလိမ့်။ ကဲ ဒီမှာ သူနဲ့ ပတ်သက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးရင် ပြင်ဆင်ထားရမယ့် စိတ်နေစိတ်ထား သဘော ထားလေးတွေ။
(1) Keep it Clean
Sex က ညစ်ပတ်ရှုပ်ပွမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Towel ရှိနေရင်တော့ အတော်အသုံးကျတာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ လေ။ တကယ်လို့ လိင် ဆက်ဆံပတ်သက်မိခဲ့ရင် ပြောပါတယ်။
လူအားလုံးကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး.....ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ ညဦးပိုင်းက ဆက်ဆံခဲ့တယ်ထားဦး ခရေ၀က သုတ်ရည်ရဲ့အနံ့ဟာ မနက်စာစား သုံးချိန်ထိတိုင် ရနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရေချိုးသင့်သလို သူ့ကိုလည်း ရေချိုးသန့်စင်ဖို့ တိုက်တွန်းသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကိုယ်က public sex လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ရှူးထုပ်လေးတွေ nana pack လေးတွေက အသုံးတည့်လှပါတယ် သန့်စင်ဖို့။
(2) The Exit
Gay Men တွေရဲ့စိတ်ဟာ တစ်ခါတလေ ထူးဆန်းပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်လို့ လိင်ဆက်ဆံပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မတော်တဆ ပတ်သက်မိ တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စပြီးမြောက်သွားချိန်မှာ ဆက်ဆံဖက်ကို လုံးဝ သည်းမခံနိုင်အောင် ရွံသွားတာမျိုး၊ အခုပဲ မပတ်သက်ချင် တော့တဲ့စိတ်မျိုး ထွက်ပြေးသွားချင်တာမျိုး တစ်ခါတလေ ဖြစ်ပေါ်မိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ရိုင်းရာလည်းမကျအောင် ကောင်းမွန်ပြီး မြောက်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို စဉ်းစားအသုံးချသင့်ပါတယ်။ sauna , Locker room တွေမှာ ဖြစ်ပျက်ပတ်သက်မိတာဆိုရင်တော့ လွယ်တာပေါ့နော်။ သူ့ အိမ်ကိုလိုက် သွားပြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ခက်ပြီပေါ့။
ရုံးခန်းလို ဒါမှမဟုတ် ဟိုတယ်အခန်းမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကားထဲမှာ နုတ်စ်စာရွက်လေးနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ ကြောင်း၊ အလုပ်တစ်ခုကို သတိရလို့ ပြန်သွားနှင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရေးထားခဲ့သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူ့အိမ်ကပြန်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ ဖုန်း မက်ဆေ့စ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် ပို့ထားခဲ့သင့်တယ်။ ဘာကြောင့်ဆို သူ့အတွက် တစ်ခုခုတော့ သိချင်မှာပဲမဟုတ်လား နှစ်ဦးသား ပတ်သက်မှု အတွက်။
(3) Don't Expect Brekkie
အမျိုးစုံကြိုးခုန်မလုပ်သင့်ပါဘူး တွေ့ဆုံဖို့ချိန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဦးသားပတ်သက်မှုအနေအထား နေရာ ဒေသတွေကိုလေ။ လိင်ဆက်ဆံ ဖို့ တစ်ကြိမ်လေးပဲချိန်းတာဖြစ်ဖြစ် ၊ တစ်ခုခု ပတ်သက်ဖို့ ချိန်းကြ တွေ့ဆုံကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး ပြောဆို ပြောင်းလဲနေတတ်တာ မျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
သူသည်လည်း အလုပ်တစ်ခုခု ရှိမယ်၊ ဘ၀တစ်ခုရှိမယ်၊ ကြိုက်တာမကြိုက်တာရှိ နေနိုင်တယ်လေ။ နှစ်ဦးသား မတွေ့ခင်က ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြုမူလုပ် ဆောင်သင့်တာပေါ့။ ( မတွေ့ခင်ကတော့ ဘော့ပ်နေပေးပါ့မယ်၊ ကြိုက်သလို အဆင်ပြေတဲ့နေရာ စသဖြင့် ဘာညာ ဘာညာတွေပြောပြီး တွေ့ဆုံတော့မှာ ဒီအခန်းမကြိုက်ပါဘူး ဒီဟိုတယ်က ဘာဖြစ်တယ် စသဖြင့်)
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ပြောင်းလဲချင်တာလည်း မဖြစ်သင့်သလို သူ့ဘက်က ပြောတုန်းကတစ်မျိုး အခုတစ်မျိုး ဆိုရင် မလိုက်လျော မျောမပါ သင့်ပါ။
(4) Just The Once, Thanks
One-night stands ဆိုတာ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခဏတာလိုအပ်ချက်အတွက် တွေ့ဆုံခြင်းပေါ့။ မကြာခဏ ဒီလို ဇာတ်ခင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ လူမှုဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာ ကသိကအောက် ဖြစ်မှုတွေ တိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်။
မယုံနိုင်ဖွယ်ရာ ကိုယ့်အတွက်agood one နဲ့တွေ့ဆုံပတ်သက်ရတယ်ဆိုရင် သူနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တိုးတက်ဖို့ကြိုးစားသင့် သလို ပါတနာတစ်ယောက်အဖြစ် အဆင့်တက်ဖို့လေ့လာသင့်ပါတယ်။ အရာရာ သူနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် မကောင်းဘူးလား။
(5) The Contact Number Thing
သူနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ အချက်အလက်အစုံရှိတယ်ဆိုရင်လည်း သီးသန့်ရေးမှတ်ထားတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် သူနဲ့ ပြန်လည်ပတ်သက်ချင်စိတ်ပြင်းပြနေမိတဲ့ အခါမျိုးမှာပေါ့။ ညက သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ် မပြည့်ခင်မှာ သူ့မေးလ် inbox ထဲကို message တစ်ခုဖြည့်ထားသင့်ပါရဲ့။ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မနေ့ညက ၊ အရင်အပတ်က၊ ပတ်သက်မိခဲ့စဉ်က ဘယ်လောက် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ခဲ့ရကြောင်း အားရခဲ့ကြောင်းတွေကိုရေးပြီး။
သူသည်လည်း သဘောထားတိုက်ဆိုင်သည်ဆိုပါစို့ ပြန်စာတွေမနည်းမနော လာနိုင်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် နှစ်လိုဖွယ် တုန့်ပြန်မှု တွေလုပ်လာပါလိမ့်မယ်။
(6) Silence = No
နှစ်ဦးသားပတ်သက်ပြီး သုံးရက်မြောက်တဲ့အထိ SMS ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Mail Message ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိလုပ်ခဲ့တာကို ပြန်မဖြေခဲ့ မတုန့်ပြန်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တုန့်ပြန်ဖို့ အရိပ်အယောင်မပြခဲ့ရင် ဆက်ပို့တာမျိုး အီးမေးလ်ဆက်ပို့နေတာမျိုး မလုပ်ပဲ သူဘာကြောင့် မတုန့် ပြန်တယ်ဆိုတာကို နားလည်အောင် ချဉ်းကပ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါကို မသိသားဆိုးရွားစွာ ဆက်လုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ဘက်က မလို လားဖွယ် မက်ဆေ့စ်တွေ၊ တုန့်ပြန်မှုတွေ ပြုလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးစွာ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ပြုမူဆက်ဆံပြော ဆိုပါ။ ဖုန်းမက်ဆေ့စ်ပို့တာ မေးလ်ပို့တာတွေဟာ နှစ်ဦးသားကြား ဆက်ဆံရေးမှာ လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တည်လာပြီဆိုမှ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ (အရည်မရအဖတ်မရ ကျူတဲ့ မက်ဆေ့စ်မျိုးလို စာတွေလို အကြောင်းအရာတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။)
(7) Meeting In Public
ကိုယ်နဲ့အတွင်းကျကျ ပတ်သက်ခဲ့သူနဲ့ အပြင်တစ်နေရာရာမှာ တွေ့ကြတယ်ဆိုပါတော့ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုပြုမူမလဲ? ဘာလုပ်မလဲ ? ဘာပဲလုပ်သည်ဖြစ်ပါစေ နည်းနည်းတော့ လျှို့ဝှက်ထားသင့်တယ် နှစ်ဦးသားကြားပတ်သက်ခဲ့မှုကို။ သူ့မှာ သူငယ်ချင်းတွေပါလာနိုင် တယ်၊ ရည်းစား မိဘမောင်ဖွားတွေ ဇနီးမယားတွေ ပါလာနိုင်တယ်။ ကိုယ်လည်းပဲ ပါလာနိုင်တယ်မဟုတ်လား အဖော်တစ်ယောက် ယောက်။ သူတို့တွေကို လျစ်လျှူမရှုသင့်ပါ။
မျက်လုံးခြင်းဆုံ မျက်ခုံးပင့်ပြတာမျိုး၊ လက်ဝှေ့ယမ်းပြတာ Hello Hi နှုတ်ဆက်တာမျိုးလောက်ပဲ လုပ်သင့်ပါရဲ့။
(8) Blowing His Chat Room Cover
Chat Room မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတယ်ဆိုပါတော့ သူ့ကို ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေ ပြန်နူးနေတာမျိုး၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို သိအောင်လုပ်နေ တာမျိုးတွေ လုပ်မနေသင့်ပါဘူး။ အဲဒါက အိပ်ယာတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေ။ ကိုယ်က သူနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့ ဆိုဦး တော့ ပေါ်မှာ လေပွေမွှေ့မနေသင့်ပါဘူးလေ။ ခပ်မြန်မြန်လေးchat အပြင်မှာပြန်တွေ့ဖို့ ကြိုးစား ပြီးရင် နောက်တစ်ကြိမ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူး ကြဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်ကြပါတယ်။
(9) Maintain the Mystery
ကိုယ့် လိင်ကိစ္စပတ်သက်မှုတွေအကြောင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဝေမျှတယ်ဆိုတာ ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ပါတနာနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့တာတွေကို မကြာခဏပြောဆိုပြနေမယ်ဆိုရင် သတင်းအမြောက်အမြားပေးနေတာနဲ့တူပြီး သူ့အတွက် နှစ်လိုစိတ်တွေ တောင့်တစိတ်တွေ ပတ်သက်ချင်စိတ်တွေ စသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ cock size, တစ်ခုခု ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေမယ့် အချက်တွေလိုမျိုးတွေကို ပြောပြတယ်ဆိုရင် လည်း သင့်သူငယ်ချင်းကို တွေးဆချက်တွေ တစ်ချို့အာသီသတွေကို ပေးနေတာနဲ့ တူပါတယ်။
နှစ်ဦးသား ဆက်ဆံပတ်သက်ခဲ့ကျတဲ့အဖြစ်ဟာ အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျေနပ်စရာကောင်းလွန်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာ ကသိကအောက်ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြစ်ဆိုစရာ မရှိလောက်အောင် ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပတ်သက်ခဲ့သူကို ကျေးဇူုးဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းကို ပြောကိုပြောရမှာပါ။ သူက တော့ပ်အဖြစ်နေခဲ့တာ ကိုယ်က ဘော့ပ်အဖြစ်နေခဲ့ရတာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကတော့ပ်အဖြစ်နေခဲ့ရတာ သူကဘော့ပ်နေခဲ့ရတာဆိုရင်တောင်မှာ ကျေးဇူးစကားလေးဆိုသင့်ပါတယ်။ သူသည်လည်း လူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သင်သည်လည်း လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။
ပြောခဲ့တဲ့အချက်အားလုံးကို ခြုံငုံကြည့်ရင်တော့ နှစ်ဦးသားကြား နှစ်လိုဖွယ်ရာအချက်တွေ ပဲရှိနေစေချင်တာ၊ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မိသူတိုင်း စိတ်ကသိကအောက်မဖြစ်ရအောင်ပြုမူစေချင်တာ၊ နောက်တစ်ကြိမ်ပတ်သက်ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်နာမည်ကြားတာနဲ့ အကောင်းမြင်အောင်ဆိုတဲ့ အချက်တွေပါဝင်တာကိုသိနိုင်ပါတယ်။
Alex Aung (27-8-2010)
စာကြွင်း။ ။ Dating ကိစ္စဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အတွက် မကင်းရာမကင်းကြောင်းမို့ သတိတရပြန်တင်လိုက် ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 10:51 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 10:23 PM No comments:
'သားညီ....ဒါဦးငယ်ရဲ့ ဘော်ဒါ ကျော်စွာလင်းတဲ့၊ ဦးငယ် နဲ့အတူလာနေမှာ။ သားညီက အန်ကယ်ကျော်လို့ခေါ်ပေါ့။'
ဦးငယ်သည် အောင်မြင်စပြုနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ဦးစီးဦးဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဖက်ရှင်ဆိုင်တွေဖွင့်ထား သည်။ ယောက်ျားလေးသုံးပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းမှာလည်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လေသည်။ ကျွန်တော် သည်ပင် သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြင့် မန်နေဂျာဖြစ်နေသည်ပင်။
ဖေကြီး၊ မေကြီးနှင့် ကိုကိုတို့အားလုံး ကနေဒါမှာ နေထိုင်နေကြ သည်မှာ ကျွန်တော်ဆယ်ကျော်သက်မစွန်းတစွန်းအရွယ်က တည်း ကပင်။ ကျွန်တော်သည်သာ ဦးငယ်ကို သံယောဇဉ်ရှိ တာရော မြန်မာပြည်မှာ နေပျော်သည်ရောကြောင့် ကျောင်း တက်ရင်း ဦးငယ်ကို ကူညီလုပ်ကိုင်ရင်း ပျော်ရွှင်နေမိသည်ပဲ။
ဦးငယ်သည် အခုအရွယ်ထိ အိမ်ထောင်မကျသေးသည့် လူပျိုကြီးဖြစ်သည်။ စီးပွားရှာကောင်းသော၊ ရုပ်ရည်ခန့်ညား သော သူ့အတွက် အိမ်ထောင်ဘက်မှာ မရှားပေ။ ဒါပေမဲ့ ဦးငယ်သည် သူ့သူငယ်ချင်းများစွာဖြင့်သာ သွားလာလှုပ်ရှား နေသည်ကများပါသည်။
အမြင်စူးရှမှု၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ လမ်းသစ်ထွင်နိုင်မှုတို့ကြောင့် ဦးငယ်ရဲ့ ဖက်ရှင်ဆိုင်များစွာဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာအနှံ့ အပြားမှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ။ ဒုတိယမြို့တော် မန္တလေးမြို့မှာပင် ဆိုင်ခွဲ ၂ခုရှိသည်။ ဦးငယ်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အများကြီး ထဲမှာ လူမျိုးစုံ ပါသည်။ သည်အထဲမှာမှ အခုအိမ်မှာ လာ ရောက်နေထိုင်မည့် အန်ကယ်ကျော်နဲ့ အတော်တွဲသည်။ ဘယ် သွားသွား ဘယ်လုပ်ငန်းဖြစ် ဖြစ် နှစ်ဦးအတူ ထူထောင်ကြ သည်ကများသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ လူငယ်ပီပီ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ရွှင်စွာ နေတတ်သည်။ ယခုနှစ်မှစပြီး UFL မှာ အင်္ဂလိပ်စာမေဂျာဖြင့် ကျောင်းစ တက်ရ မည် ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်လွန်ခါစ လူငယ်တစ်ဦးပင်ဖြစ်တော့သည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက အားကစားဝါသနာ ပါသည် ကြောင့်ရော ဖေကြီးနဲ့ တူသည် ကြောင့်ရောထင့် ထွားကြိုင်းသည်မှာ ဦးငယ်ဘော်ဒီနှင့် မတိမ်း မယိမ်းပင်။ စိတ်ထားကတော့ ကလေး ဆန်ချင်တုန်းဖြစ်သည်။
မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးခါစ အိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာစဉ် ဦးငယ် မန္တလေးကပြန်ရောက်ပြီး သူ့သူငယ်ချင်းနှင့် မိတ်ဆက် ပေး လာခြင်းဖြစ် သည်။ အန်ကယ်ကျော်ဆိုသူကို သိပ်သဘော မကျချင်ပါ။ မျက်လုံးများက တစ်မျိုးလို့တော့ ထင်မိသည်။ ည အိပ်ဘောင်းဘီမလဲရသေး သည့် ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်သည့် ပုံစံက နည်းနည်းဆန်းချင်သည်။
တက္ကသိုလ်စတက်ခါစ လူငယ်တွေထုံးစံအတိုင်း သူငယ်ချင်း အသစ်တွေဖြင့် သွားတာလာတာ သင်တန်းတွေ တက်ကာ ဖြင့်နေမိသည် ကြောင့် ပထမနှစ်ဝက် စာမေးပွဲတွင် အမှတ် အလွန်နည်းလှစွာဖြင့် အောင်သည်။ ညနေခင်း အိမ်ရောက် တော့ ကျွန်တော့်အိတ်ကို ဦးငယ်ယူကြည့်စဉ်မှာတော့ ထိုအ မှတ်စာရင်းစာရွက် ဦးငယ်လက်ထဲရောက်သွားခဲ့လေသည်။ စာနှင့်ပတ်သက်လျှင် ဖေကြီးထက်ပင် စနစ်ကြီးသော ခွင့်မ လွှတ်တတ်သောကြောင့် ဖေကြီးက စိတ်ချယုံကြည်ခြင်းကို ခံယူရသူဖြစ်သည်။
'ကျော်စွာ...ဒီကောင့်ကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ကိုကြီးက အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ဘယ်လိုမှသူ့ကို စောင့်ကြည့်နေ နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျော်စွာက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ကိုကြီး ကိုယ်စားထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်ပေးပါ။ ပြီးတော့ အမှတ် စာရင်းမှာက ဒီကောင်တော်တော်အမှတ်နိမ့်နေတယ်။ ညီက သြဇီက ပါရဂူဘွဲ့ယူခဲ့သူဆိုတော့ အတော်ပဲ ကောင်းကောင်း ထရိန်နင် လုပ်ပေးပါ။' ဦးငယ်သည် ကျွန်တော်နှင့် အန်ကယ် ကျော်အား ရှည်လျားစွာမှာကြားပြီး စာကြည့်ခန်းရှိရာသို့ ထွက် သွားလေတော့သည်။
'ကဲ...ကောင်ကလေး မင်းဦးလေးကတော့ အန်ကယ်ကျော့် လက်ထဲ မင်းကိုအပ်လိုက်ပြီ...ဒီနေ့ကစပြီး သားညီရဲ့ ကောင်း ခြင်းဆိုးခြင်းက အန်ကယ်ကျော့်အပေါ်ကိုရောက်လာပြီ။'
ထိုစကားကို အန်ကယ်ကျော်က ကျွန်တော့်ပုခုံးကို အသာညှစ် ကိုင်ရင်းပြောလေသည်။ တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးပင် ဦးငယ်က သူ့သူငယ်ချင်းကို ကျွန်တော့်အား အလုံးစုံအပ်နှံသည့်ပုံဖြစ်နေ သည်။
ကျွန်တော်သည် အခုအရွယ်ထိ ကလေးစိတ်မကုန်သေးပေ။ ကိုယ့်ထက်ငယ်သော ကလေးတွေနှင့် ကစားကောင်းတုန်း၊ သူငယ်ချင်းတွေ နှင့် ကစားတုန်းပင်။ ပြီးတော့ အိမ်မှ ကားဒရိုင် ဘာ ဦးလေးရဲ့ သား ရဲမွန်နှင့်လည်း နဘမ်းလုံးကောင်းတုန်း ရှိသေးသည်။ ဒါကို အိမ်ရောက်ခါစ အန်ကယ်ကျော်က မကြိုက်သလို ရှိသော်လည်း ကျွန်တော့်အား ဘာမှမပြောခဲ့ပေ။ အခုတော့ အန်ကယ်ကျော့် အကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီ။
အိယ်ယာထချိန်မှစ၍ မျက်စိနှစ်လုံးမှိတ်ချိန်ထိ ကျွန်တော့်အား Time Table ဆွဲပေးလေသည်။ ကျွန်တော့်ကို နားဝင်အောင် ချော့မေ့ာ့ဆို ဆုံးမသည်။ သူ့အစီအစဉ်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာကို သူ ကိုယ်တိုင် ကြပ်မတ်သင်ကြားပေးသလို ကျောင်းကစာများကို လည်း ဖြေရှင်းပေးသည်။ အချိန်ကြာလာတော့ သူ့ကိုအထင်ကြီး အားကျလာမိတော့သည်။
အလုပ်က လက်အောက်ငယ်သားတစ်ချို့အပါအ၀င် ရဲမွန် တို့ဖြင့် ရောနှောနေသည်ကို ဘာမှမပြောပေမဲ့ ကွယ်ရာတွင် တော့ သူတို့အား ဆူသည်ပြောသည်ဟု သိရသည်။ နောက် သူတို့တွေက ခပ်တန်းတန်းဆက်ဆံသော အခါမှ အန်ကယ် ကျော်က အာရုံမလွင့်အောင် စာကိုပိုဂရုစိုက်အောင်ဝိုင်းပြီး ကြပ်မတ်ပေးဖို့ ပြောထားလို့ဆိုသည်။
အိမ်က ရဲမွန်သည် ကျွန်တော့်ထက် ၂နှစ်သာကြီးပြီး အဝေးသင် တက်နေသူဖြစ်သည်။ သူ့အဖေ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ ဒရိုင်ဘာ လာ လျှောက်စဉ်ကတည်းက ပါလာသော ငယ်မွေးခြံပေါက် ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော့်ကစားဖော်ပြောသမျှ လုပ်ဆောင် ပေးတတ်သော သူအဖြစ် အိမ်တွင်ရှိနေသူဖြစ်သည်။
ဒါကိုအန်ကယ်ကျော်က ဘာဖြစ်သည်မသိ ရဲမွန်နှင့် လုံးထွေး နေသည်ကို မျက်စိစပါးမွှေးဆူးလေသည်။ 'သားညီ ဒီကောင် တွေနဲ့ အရော ၀င်လုံးထွေးနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။ သားညီအားလပ်ချိန် ပျင်းရင် အန်ကယ်ကျော်နဲ့ တင်းနစ်ရိုက် ရင်ရိုက်၊ ဗီဒီယိုကြည့် ချင်ရင် လည်းကြည့်။' အန်ကယ်ကျော် သည် ကျွန်တော့်အား ထိုအချိန်က (ကျွန်တော့်အထင်) သား အရင်းနှင့်မခြား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့လေ သည်။ လက်သည်း ခြေသည်း ညှပ်ပေးတာမျိုး၊ တစ်ခါတစ်လေ ရေချိုးခါနီး ခေါင်း လျှော်ပေးတတ်တာမျိုး လုပ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုအချိန် များတွင် ရဲမွန်သည် မျက်နှာသုပ်ပ၀ါလေးကိုင်ကာ ကျွန်တော့်အား တွေ ဝေစွာငေးကြည့်နေတတ်၏။
တစ်နေ့ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် သူအိမ်အပြင်ထွက်သွားစဉ် အိမ်မှာ ကျွန်တော်၊ ထမင်းချက်လင်မယား၊ ရဲမွန်သာလျှင် ကျန်နေခဲ့၏။ ကျွန်တော့်အား အန်ကယ်ကျော်ပေးခဲ့သော အိမ်စာများအား အခန်းထဲတွင် ရေးဖြေနေချိန်တွင် 'ဒေါက်....ဒေါက်' ဆိုတဲ့ တံခါးခေါက် သံနှင့်အတူ အခန်းအပြင်ဘက်မှ အသံပြုတာ ကိုကြားလိုက်ရသည်။
အခန်းတံခါးကို အသာလှစ်ပြီး ၀င်လာသည့်ရဲမွန်သည် အခန်း ထဲရောက်မှ ဘာကို မလုံမလဲဖြစ်နေသည်မသိ ဟိုကြည့်သည် ကြည့်။
'ဟမ်...ကိုရဲက ဘာသတိပေးမလို့တုန်းဗျ ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါ ဗျာ။'
'ကိုညီ ဘယ်သူ့မှ ပြန်မပြောဘူးလို့ ကတိပေးမှ ပြောမယ်ကွာ။'
' ဟုတ်ပါဗျာ...အကိုကလည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း။'
'ဒီလို ကိုညီရဲ့ ကိုညီ့ဦးငယ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းအန်ကယ်ကျော်လေ ကိုညီ့အပေါ် မရိုးသားသလိုပဲ။ ဟိုတနေ့က သူ့သူငယ်ချင်းတစ် ယောက် လာလည်ရင်း ပြောနေကြတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်မှန်းမသိ ပေမဲ့ တစ်မျိုးပဲဗျာ။ ကောင်လေးကို ငါမွေးထားတာ သိပ်မကြာ ခင်စားလို့ရပြီတဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းက နင်တစ်ယောက် ထဲကြိတ်စားမနေနဲ့ ငါ့ကိုလည်း ပေးကျွေးဦးလို့ သူတို့အချင်းချင်း ပြောနေကြတယ်။'ဟု ရဲမွန်က တုန်တုန်ရင်ရင်ဖြင့်ပြောလေ သည်။
သူပြောသောစကားတွေကြောင့် ကျွန်တော်အလွန့်ကို နားရှုပ် သွားလေ၏။ ဘာတွေလည်း မွေးစားတာတွေရော စားလို့ရပြီဆို တာတွေရော ငါ့ကိုလည်း ကျွေးဦးဆိုတာတွေရော။ ကျွန်တော် စိတ်ညစ်သွားရလေသည်။
'ကိုညီကလည်းဗျာ ပြောရမှာ ခက်တယ်။ အန်ကယ်ကျော်က ကိုညီ့ကိုကြိုက်နေတာဗျ။' ရဲမွန်ပြောလိုက်သောစကားကြောင့် အလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားမိသည်။
'ကိုရဲကလည်း ကြည့်ပြောပါဦး။ ယောက်ျားလေးချင်းကြိုက်စရာ လား။ မိုးကြိုးတွေပစ်ကုန်ပါဦးမယ်။'
'ဘယ်က မိုးကြိုးပစ်ကုန်ရမှာလည်း ကိုညီရဲ့ ဦးငယ်....ဦးငယ်နဲ့ သူနဲ့က လင်မယားလိုနေကြတာ။ ဦးငယ်က အလုပ်များနေ တော့ ကိုညီ့ဘက်လှဲ့လာတာပေါ့။'
ကျွန်တော်တွေဝေသွားရပါ၏။ ကိုရဲဆိုသည့် ရဲမွန်သည် ကျွန် တော့်အတွက်ဆို ငယ်စဉ်ကတည်းက အနစ်နာခံသူ၊ အကျိုးလို လားသူဖြစ် သည်။ ကျွန်တော့်အား လိမ်ပြောလိမ့်မည် မဟုတ် ပေ။
'ကိုညီလိုချင်တာရှိရင်ပြော....ကိုရဲပေးမယ်။ အဲဒီ့လူကြီးနဲ့တော့ သွားမပတ်သက်ပါနဲ့ဗျာ'
ရဲမွန်သည် အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွပါသော ထိုစကားကို ပြောဆိုကာ အခန်းထဲမှ ထွက်သွားလေသည်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကြည့်ဖူးကြားဖူး နေသော ကိစ္စ....အား...ဘ၀၏ ရှုပ်ထွေးမှုဆိုတာကြီးနဲ့များ ကျွန်တော် ပထမဆုံးအကြိမ်စ၍ ရင်ဆိုင်နေရပြီနဲ့တူသည်။
'သားညီ...အန်ကယ်ပြန်လာပြီ၊ အန်ကယ်ကျော့်အခန်းကိုလာခဲ့ ဦး။ ဒီမှာ မင့် ဦးငယ်က အ၀တ်အစားဒီဇိုင်းအသစ်တွေ ထည့် ပေးလိုက် တယ်။ တော်မတော်ကြိုက်မကြိုက် လာဝတ်ကြည့် ဦး။'
မြို့ထဲမှပြန်လာသော အန်ကယ်ကျော်၏ အသံကို ကြားလိုက်ရ ၏။ ယခင်ကဆိုလျှင် အန်ကယ်ကျော့်အခန်းကို အမြန်ဝင်ကာ ကျွန်တော့် အတွက်ယူလာသော အ၀တ်အစားများအားပြေးယူ မိမည်ဖြစ်သည်။ ယခုတော့ ရဲမွန်ပြောစကားကြောင့် ကျွန်တော် ရွံ့တွန့်တွန့်ဖြစ်နေ၏။ နောက်ဆုံးတော့လည်း အန်ကယ်ကျော့် အခန်းရှိရာကို ရောက်သွားရတာပါပဲ။
'သားညီ ဒီမှာဝတ်ကြည့်စမ်းပါဦး ဂျင်းဘောင်းဘီဒီဇိုင်းအသစ် တွေ။ အခုခေတ်စားနေတဲ့ Skinny ရော ၊ Retro ဒီဇိုင်းတွေ ရော။ အင်္ကျီက တော့ Body Fit တွေယူ လာတယ်။ မင်းဘော်ဒီ နဲ့ဆိုလိုက်မှာပါ။' အန်ကယ်ကျော်က ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ကျွန် တော်ဝတ်ထားသော အင်္ကျီကြယ်သီး အားဖြုတ်ပေး နေ၏ ဒီလို မျိုးလုပ်ပေးနေကြ အန်ကယ်ကျော်မှာ ဘာမှမဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော့်မှာ ရင်တုန်သလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်နေ ရတော့သည်။
ပြီးနောက် သူယူလာသော အင်္ကျီများကို တစ်ထည်ပြီး တစ် ထည်ဝတ်ကြည့်ခိုင်းတော့သည်။ 'သားညီ ဘောင်းဘီလည်း ၀တ်ကြည့်ဦး လေ..မတော်ရင်ဆိုင်ကို ပြန်ယူသွားရအောင်။'
'ဟို....ဟိုလေ' ' ဘာဟိုလေလဲ...ကဲချွတ် အောက်ခံဘောင်းဘီ ပါတယ်မဟုတ်လား...ကိုယ့်ဦးလေးပဲ ရှက်မနေစမ်းပါနဲ့။'
သူပြောသမျှစကားတွေကို လိုက်လုပ်ဖို့လိုသလား။ ဟိုတွေးဒီ တွေးဖြစ်ရင်း နောက်ဆုံးတော့ ငြင်းမရသည့်အဆုံး ဘောင်းဘီ အားချွတ်ချ လိုက်လေတော့သည်။ ထိုအခါတွင်မှ သတိထား မိသည်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီတိုအောက်မှ ကျွန်တော့် ငပဲ သည် ဘောင်းဘီအတွင်းမှ ကွဲထွက်တော့မည့်အလား ရုန်းကန် နေလေသည်။
ပထမတွင် အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်အောက်ခံဘောင်း ဘီအတွင်းမှ ရုန်းထွက်တော့မည့်အလား ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေ သော အရာကို မှင်သက်မိသလိုမျိုးကြည့်နေမိသော် လည်း သတိပြန်ဝင်လာသည့်ပုံဖြင့် မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ သူယူလာသော ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ထည်အား ကျွန်တော့်ကို ပေးကာ 'ကဲ...သားညီ ၀တ်ကြည့်'ဟု တုန်ရင်တိုးလျှသော အသံလေးဖြင့် ပြောလေသည်။
ကျွန်တော်လည်း အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြင့် ဂျင်းဘောင်း ဘီအားသူ့လက်မှ ကောက်ယူဝတ်လိုက်ပြီး ဘောင်းဘီဇစ် အားဆွဲတင် လိုက်သောအခါဝယ် 'အား' မျက်စိထဲတွင် မီးပွင့် သွားပြီး ကျွန်တော့်လိင်တံအား မီးစနှင့် ထိုးခံလိုက်ရသလိုမျိုး ခံစားလိုက်ရလေသည်။ ဘောင်းဘီဇစ်ကို မဆင်မခြင်ဆွဲတင် လိုက်သောကြောင့် ဇစ်နှင့် ထိပ်ဖျား မိတ်ဆက်သွားရလေ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော့် မျက်စိထဲဘာမှမမြင် တော့။ အန်ကယ်ကျော့်အခန်းထဲ ကုန်းကုန်းကွကွဖြစ်နေရ လေတော့သည်။ 'ဟ..ဟ သားညီ ဘာဖြစ်တာလဲ အထိတ် တလန့်ရှိလိုက်တာကွာ။'
အန်ကယ်ကျော့်အသံကြားမှ ကျွန်တော်သတိဝင်လာတော့ သည်ပဲ။ ဖြစ်နေချိန်တွင် ကျွန်တော့်ရှက်စိတ်များသည် ဘယ် ကိုလွင့်စင် သွားသည်မသိ။ နာကျင်မှုကသာ ဦးဆောင်နေလေ သည်။ 'ဟို...ဟိုလေ ဘောင်းဘီဇစ်ညှပ်နေလို့....အား'
'အင်း....ဘာများဖြစ်သလည်းလို့ မင်းကလေ မင့်ဦးလေးနဲ့ တော်တော်တူတယ်။ လုပ်ချင်ရာစွတ်လုပ်တာပဲ ရှေ့နောက် ဘာမှ မကြည့်ဘူး။ တူနဲ့ဦးလေးနဲ့ လိုက်ပ။'
ဗီရိုထဲမှ ဆီတစ်မျိုးကိုယူ ဘောင်းဘီဇစ်အားသုတ်လိမ်းပြီး ဇစ်ကိုရုတ်တရက်ဆွဲချလိုက်တော့ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲတွင် ဘာမှမမြင်တော့ ဘဲ ဒူးထောက်ကာ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီ ဇစ်အားဆွဲဖြုတ်ပေးနေသော အန်ကယ်ကျော့် ခေါင်းအားကိုင် ကာ ကျွန်တော့်ကိုယ်နဲ့ဆွဲကပ် ထားနေမိတော့သည်။ ကျွန် တော် သတိဝင်လာသောအခါဝယ် အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံတွင် မျက်နှာအပ်နေလျှက် အရေပြားမှပဲ့၍ ထွက်လာသော သွေးစတို့သည် သူ၏ပါးပြင်ဝယ် စွန်းပေလျှက် တွေ့လိုက်ရလေသည်။
'ကန်တော့ ကန်တော့ ကျွန်တော် တအားနာသွားလို့။'
'ဘာအခုမှ ကန်တော့လည်း ဒီမှာသွေးတွေပေကုန်ပြီ အသည်း ငယ်လိုက်တာလည်းလွန်ရော လူကောင်ကြီး နဲ့မှမလိုက်။'
အန်ကယ်ကျော်သည် အပြစ်တင်စကားဆိုသော်လည်း ဒေါသ ထွက်ဟန်မတူ။ ကျွန်တော့်မှာသာ အနည်းငယ် ထိတ်လန့်သွား ရသည်။
ထိုအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်သည် ဒစ်မပြုတ်သေးပေ။ အရေ ပြားသည် ကျွန်တော့်အတံအား ငုံထားသည်မှာ ငှက်ပျောဖူး ကြီးသကဲ့သို့ ပင်။ ကျွန်တော့်အသက်အရွယ် နှင့်မလိုက်ဖက် ကျွန်တော့်ညီဘွား အရှည်မှာ ၅လက်မနှင့် ၈စိတ်လောက်၊ လုံးပတ်မှာ ၁ိ^ကျပ်လုံးပတ် ခန့်ရှိနေလေပြီ။
'ကဲ..ဒီအတိုင်းထားလို့ သွေးကတိတ်မှာ မဟုတ်ဘူး...လာ အန်ကယ်ကျော်လုပ်ပေးမယ်။'
ရဲမွန်သတိပေးစကား ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲဝင်လာပေမည့် ခုလို အခြေအနေမှာ ဘယ်လိုမှငြင်းဆန်၍ မဖြစ်နိုင်တော့။ ကျွန်တော့် အား ခုတင်စောင်းတွင် ထိုင်ခိုင်းကာ အောက်ခံဘောင်းဘီအား ဆွဲချွတ်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါတွင် ကျွန်တော့်အတံသည် ဘောင်းဘီ အောက်မှ ရုန်းထွက်လာပြီး အန်ကယ်ကျော့် မျက် နှာဆီသို့ အမြောက်နဲ့ချိန်ထားသကဲ့သို့ ဒူးထောက်၍ ထိုင်နေ သော အန်ကယ်ကျော်၏ မျက်နှာရှေ့တွင် တရမ်း ရမ်းဖြစ် နေလေသည်။
အန်ကယ်ကျော်သည် အရက်ပြန်အား ဂွမ်းဖြင့်တို့ကာ ကျွန်တော့်ငပဲအား သုတ်လိမ်းပေးလေသည်။
'မင်းကလည်း ယောက်ျားလေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ ခဏလေး အောင့်ခံ'
အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော်မစပ်စေရန် လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ကျွန်တော့်ဟာကိုဆုပ်ကိုင်လျှက် သူ၏ နှုတ်ခမ်းပါးကလေး များကို စူလျှက် ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို လေဖြင့်မှုတ်ပေးလေသည်။
အရက်ပြန်အရှိန်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ အန်ကယ်ကျော် မှုတ် ပေးသောလေကြောင့်လည်းကောင်း အေးကနဲဖြစ်သွားကာ အနည်းငယ် အစပ်ပြေသွားလေတော့သည်။ အန်ကယ်၏ နှုတ်ခမ်းအစုံသည် ကျွန်တော့်ပစ္စည်းထိပ်နားတွင် ကပ်ကာမှုတ် ပေးနေသည့်ပုံမှာ ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့ ခံစားမှုအသစ်ဖြစ်သော ကြောင့်မမေ့နိုင်စရာပင်။ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်တွင်ထိုင်လျှက် လက်အားနောက်သို့ထောက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကော့ ပေး နေမိတော့၏။ တစ်ချက်တစ်ချက် ကျွန်တော့်ဟာနှင့် အန်ကယ် ကျော်၏ စိုလက်နေသည့် နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာ သည် ထိတစ်ချက် မထိတစ်ချက်ဖြစ်နေလေတော့သည်။ အတန်ကြာ မိန့်မူးနေ မိပြီးတော့မှ သတိဝင်လာကာ မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက် သောအခါ တွင် သူ၏လက်အစုံက ကျွန်တော့်ငပဲအား ယုယစွာကိုင်လျှက် ဖြင့် နှုတ်ခမ်းအစုံအား စူလျှက်ကျွန်တော် မစပ်စေရန် ထိပ်နား ကပ်လျှက် တဖူးဖူးနှင့် မှုတ်ပေးနေလေသည်။
အန်ကယ်ကျော်၏ မျက်လုံးအစုံသည် ကျွန်တော်ကဲ့သို့ မှေးစင်း နေလေသည်။ 'အန်ကယ် ညီ့ဟိုဟာမှာ သွေးနည်းနည်းထွက် နေသေး တယ် ဆေးခန်းသွားပြရမလားဟင်' ကျွန်တော်စိုးရိမ် စွာနဲ့ မေးမိတာပေါ့ဗျာ။ ဒီကိစ္စနှင့် ဆေးခန်းသွားပြရမှာ ရှက်စရာ ကောင်းသမို့လား။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားလေးတွေ မှာ ဒီဟာက အဓိကပင် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်း၊ တော်ကြာ တစ်ခုခုဖြစ် သွားမှဖြင့် ကျွန်တော်လူညွန့် တုန်းပေတော့မည်။
'ဘာမှ ဆေးခန်းသွားပြစရာမလိုဘူး... ခုချက်ခြင်း သွေးတိတ် အောင် လုပ်ပေးမယ် မျက်စိမှိတ်ထား။'
'မနာပါဘူးကွာ...မနာတဲ့အပြင် နတ်ပြည်ရောက်သလိုမျိုးဖြစ် သွားမယ်။'
ကျွန်တော် နားမလည်နိုင်စွာဖြင့် မျက်စိအစုံအား မရဲတရဲပိတ် လိုက်၏ ပထမတွင် ကျွန်တော်၏ ငပဲထိပ်သည် ငွေ့ငွေ့လေး ပူနွေးလာကာ တဖြည်းဖြည်း စိုစွတ်လာလေသည်။ ထိပ်မှသည် တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အကြောအခြင်များကို စုပ်ယူခြင်း ခံလိုက်ရ သလိုမျိုးဖြစ်သွားလေသည်။ အန်ကယ်ကျော်ဘာလုပ်လိုက်လေ သနည်း။
ကျွန်တော်သိချင်စိတ်ကို ထိန်းမရတော့တာကြောင့် မျက်လုံးကို တဖြည်းဖြည်းခြင်းဖွင့်လိုက်သောအခါ အံ့သြသော....အားနာ သော မဖော်ပြနိုင်သော ခံစားမှုတရပ် ကျွန်တော့်ရင်ကို ၀င် ရောက်လာလေပြီ။
အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ၏ ပါးစပ်တွင် ငုံကာ စုပ်ပေးနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 'အန် ကယ်.... မလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုငရဲမပေးပါနဲ့' ကျွန်တော် အလန့်တကြား တောင်းဆိုလိုက်သည်။
'ဘာမှ ငရဲမကြီးပါဘူးကွာ ပြီးမှ မင်းငရဲမကြီးအောင် အန်ကယ် ပြန်ပြီး လုပ်ပေးမှာပေါ့။'
ကျွန်တော်နားမလည် အန်ကယ်ကျော်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဘာပဲပြောပြော ဒီအချိန်မှာတော့ ဘယ်သူလာတားတား ကျွန်တော် ဂရုစိုက်တော့မည်မဟုတ်တော့ပေ။ အန်ကယ် ကျော်လုပ်ပေးသမျှ ငြိမ်ခံနေမိတော့၏။
ပထမတွင် ငြင်သာစွာ အာငွေ့ပေးပြီး ဖြေးညင်းစွာ စုပ်ပေးနေ သော်လည်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကျွန်တော့်ငပဲအား ဂွင်းတိုက် သလိုမျိုး သူ၏လက်အစုံဖြင့် လုပ်ပေးနေသည့်အပြင် သူ့ပါးစပ် ထဲတွင် တပ်လျှက်ဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်အတံအားလည်း အဆက်မပြတ် အားပြင်းစွာ စုပ်ယူပေးနေလေသည်။
ကျွန်တော်သည် ကာမအရာသာ၏အထွဋ်အထိပ်ဆုံးဖြစ်သော ပုလွေမှုတ်ပေးခြင်းခံရသည်ကို အဦးဆုံးစတင်ခံစားရမိခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အပြာဇာတ်လမ်းများကိုကြည့်ဖူး၊ ကောင်မလေး တွေနဲ့ တွဲဖူးပေမဲ့ လက်တွေ့ဘယ်တုန်းကမှ မစမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ ပေ။ ရှက်သည်ရော ကြောက်သည်ရောကြောင့်ထင်ပါရဲ့။
အခုများတော့ ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းဆိုသည့် စိတ်ကြောင့် ရော၊ ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုသည့် မသိစိတ်ကြောင့်ရောပါ သည်ထင့် အန်ကယ်ကျော်ပြုသမျှကို အသာတကြည်လိုက်ပါ သွားမိတော့သည်ပင်။
အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်ငပဲအား အချက် ၂၀ခန့်အား ကုန်စုပ်လိုက် ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက် လုပ်ပေးသောအခါ ကျွန် တော့်တစ်ကိုယ် လုံး ဓာတ်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီး ဆီးသွား လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဖြူပစ်ပစ်အရည်များ အန်ကယ့်ပါးစပ် တွင်းသို့ ပန်းထွက်သွားလေ တော့၏။
'မင်းကိုချစ်လို့လုပ်ပေးတာနော်။ အဲဒါကိုပုလွေမှုတ်ပေးတယ်လို့ ခေါ်တယ် သားညီရ။အဲဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်ရင် ဘယ်ကောင်မှ မခံနိုင်တော့ဘူး။ မင်း ဦးငယ်ဆိုရင် ညဘက်အန်ကယ်ကျော် ပုလွေမှုတ်ပေးမှ ကျေနပ်ပြီး အိပ်ပျော်သွားတတ်တာ။'
'ဘာခုမှ နားရှက်စရာလဲ...ခုနကတော့ တဟင်းဟင်း တဟဲ ဟဲနဲ့'
'အာ..ဒါကတော့ဗျာ ကျွန်တော်က အဲဒီလိုမျိုး အတွေ့အကြုံမှ မရှိတာဘဲကို။'
'ဒါဆိုရင်..ဒီကိစ္စအတွက် ဘာမှမပူနဲ့ အန်ကယ်ကျော်ကဘဲ သားညီကို ပညာစုံသင်ပေးလိုက်မယ်။ ဒါမှ သားညီ ဘာလာလာ ဂိမ်းမှာ။'
အန်ကယ်ကျော် သိမ်းသွင်းစပြုလေပြီ။ ကျွန်တော့်မှာ အတွေ့၊ ပြီးတော့ ထပ်မံစူးစမ်းချင်စိတ်၊ ဘာတွေထပ်ပြီး ခံစားရဦးမလဲ စတာတွေပါဝင်တဲ့ ကွန်ယက်မှ ရုန်းမထွက်နိုင်ဘဲ ငြိတွယ်သက် ဆင်းရပြီပေါ့။
ရဲမွန်ကရော ဒါတွေ ဘာကြောင့် သိရသလည်း။ သူပြောတဲ့ စကားများက တဖြည်းဖြည်းမှန်လာလေပြီ။
နောက်တနေ့ မနက်ခင်းအရောက်မှာတော့ မနက်ကော်ဖီ သောက်ချိန်ကို တမင်လွှဲပြီးမှ ထသည်။ ဦးငယ်နှင့် မျက်နှာချင်း ဆိုင်ရမှာ ရှိန်းနေသလိုပင်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းပိတ်တာကို အ ကြောင်းပြပြီး အိပ်ယာထ နောက်ကျပစ်သည်။
ရဲမွန်လာနှိုးတော့မှ မထချင်ထချင်နဲ့ အိပ်ယာထဲကထွက်သည်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ရဲမွန်ကျွန်တော့်ကို စကားသိပ်မပြော။ ထား လိုက်ပါ ဒီကောင် ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး။
သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတွေ လှမ်းခေါ်လို့မြို့ထဲလျှောက်သွား တော့လည်း ခါတိုင်းလို သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘဲ မနေ့ညက အတွေ့ အကြုံကို တောင့်တနေမိသည်ပဲလေ။
'သားညီ.....ဦးငယ်ရုံးခန်းကို ခဏလာဦး' ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဒိန်း ကနဲဖြစ်သွားတာပဲ။ သိများသိသွားသလားမသိ။ သူ့ပါတနာကို ကျွန်တော်က လုတာမှမဟုတ်တာဘဲနော်။
ပက်ကင်ပေပါ လှလှတွေနဲ့ ထုပ်ပိုးထားပေမဲ့ အထဲမှာ ဘာတေ ပါသည်ဆိုသည်ကိုတော့ ရိပ်မိသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်သုံးဖို့ Lube တွေ၊ ကွန်ဒုံးတွေကို ၀ယ်လာခြင်းဖြစ်မည်။ ကျွန်တော်ကရော ဒါတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ ဦးငယ်ထင်ထား သလားမသိ။ ဒီလိုမှမဟုတ်.....။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တိတ်ဆိတ်လို့ ဒရိုင်ဘာတို့ မာလီတို့ ခြံထဲမှာ သူ့အလုပ်နှင့်သူ။ ရဲမွန်လည်း ကျောင်းကမပြန်လာ သေးဘူး ထင်ပါရဲ့။ အဲဒီကောင်က အဝေးသင်တက်နေတာ ဒီနေ့စာစဉ်သွားတင်တာလေ။
ရေမိုးချိုး ကျောင်းကစာတွေလုပ်၊ အန်ကယ်ကျော် နားထောင် ခိုင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်တဲ့ စီဒီတွေနားထောင်၊ အားလုံးပြီး သွားတော့ တစ်ခုခုကို တောင့်တမိသလိုပါ။ ထမင်းစားပြီးတစ် မျိုးလိုပြီထင်ပါရဲ့။
အန်ကယ်ကျော်တို့ အခန်းဘက်ကို သွားကြည့်ဦးမှပါ။ 'ဟင် အခန်းတံခါးကို စေ့ရုံပဲစေ့ထားပါလား။' အခန်းတံခါးကိုခါတိုင်း ဆို သော့ခတ်ထားတတ်ပါသည်။ အထဲမှာ တော်တော်သပ်သပ် ရပ်ရပ် ဖြစ်နေသလိုပဲ။ ဦးငယ်တစ်ယောက်တည်း နေတုန်းကလို မဟုတ် မွှေးကြိုင်အေးမြလို့။ တီဗီစင်နားမှာလည်း စီဒီတွေ၊ ဒီဗီဒီ ခွေတွေ အများကြီး...ဘာခွေတွေရှိလည်း။ Frozen Flowers တဲ့ Brokeback Mountain တဲ့...ဟိုကားတွေ။ အားပါးပါး... ဘာ ခွေတွေလည်း ဘော်ဒီလှလှ ငနဲတွေရဲ့မပေါ့တပေါ်ခွေတွေ၊ ဆူးလေပလက်ဖောင်းနားက ခွေဆိုင်မှာတွေ့ဖူးတဲ့ M2Mလို့ ရေးထားတဲ့ ကားတွေပါလား။
ကိုရီးယားကားကို စက်ထဲထည့်ပြီး ကြည့်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်း ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ပြကွက်တွေက စိတ် လှုပ်ရှားစရာအပြည့်။
နောက် M2M အခွေတွေ လျှောက်မွှေကြည့်တော့ ဘော်ဒီ တော်တော်မိုက်တဲ့ ဘရာဇီး သရုပ်ဆောင်တွေပါတဲ့ အခွေ အား စက်ထဲထည့်ရင်း စတင်စူးစမ်းဖြစ်ပါတော့သည်။ ဇာတ်ကား စာ တန်းထိုးကတည်းက သရုပ်ဆောင်တွေ အကုန်လုံး ရေကူးကန် မှာ ပါတီလုပ်နေကြသည်။ ဘော်ဒီတွေက တော်တော်မိုက်သည် မှာ ကျွန်တော်တောင် သူတို့လိုဖြစ်ချင်လာသည်။ သူတို့ရင်အုပ်၊ ဘယ်လီကြွက်သားတွေပြီးတော့ တင်ပဆုံတွေက လုံးကျစ်လှပ နေကြသည်မှာ စိတ်ထဲတစ်မျိုးတမည်ဖြစ်ကရော့။
ဇာတ်လမ်းတစ်ခန်းနှစ်ခန်း အရောက် သူတို့တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်စပြုလာပြီ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အား...လက်တွေက အောက်ပိုင်းကို ရွေ့လာပြီး အားလုံးကို ချွတ်ချလိုက်တာ....၀ိုး....ဒစ်တွေက ထွားလိုက်တာ ရွှေငှက် ပျောသီးတွေ ကြနေတာပဲ။ ပြီးနောက် ဇာတ်ဆောင် တစ်ယောက်က တခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ဒစ်ကို နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာ ဖြင့်ညှပ်ဆွဲရင်း လျှာနဲ့ကစားနေတာ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားသည် သံချောင်းကဲ့သို့မာကြောလာပြီးလျှင် ၄င်းတို့ကဲ့သို့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စပ်ယှက်ချင်စိတ်များ တားမရဆီးမရဖြစ်နေလေတော့သည်။
အန်ကယ်ကျော်နဲ့ ဦးငယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြသလည်း။ ဒီဇာတ် ကားထဲကအတိုင်းများလား။ တွေးရင်းပြုရင်း မနေ့ညကအဖြစ် ကို ပြန် သတိရမိလာခြင်းနဲ့အတူ လက်ကလေးနဲ့ခပ်ဖွဖွကစားမိ ရပေါ့။ ထောင်ထောင်ထလာသော ညီဘွားကို ဘောင်းဘီတိုထဲ လက်လျှိုရင်း ဂုတ်ချိုးပေးနေရတာလေ။
'ကျွိ' အာ....အခန်းတံခါးရုတ်တရက် ပွင့်လာမှ တံခါးလော့ခ်မချ မိတာကို သတိရမိခြင်းနှင့်အတူ အန်ကယ်ကျော်ဝင်လာတာကို မြင်လိုက်ရသည်။ ဇာတ်ကားကိုလည်း မပိတ်မိ ဘောင်းဘီထဲ လက်လျှိုထားတာကိုလည်း မရုပ်သိမ်းမိ သူ့ကိုကြောင်အမ်း အမ်းနှင့် သူခိုးလူမိ အကြည့်ဖြင့်ကြည့်မိရတော့သည်။
'ကောင်သူခိုးလေး....လူမိသွားပြီဟေ့...ဘာမှမလုပ်တတ်သလိုလိုနဲ့ အခန်းထဲလာ တီဗီကြည့်ရင်း ဂွင်းတိုင်နေတာပေါ့လေ။' အန်ကယ် ကျော်ရဲ့ ပွင့်လင်းသောအပြောကြောင့် ကျွန်တော့် မျက်နှာမထားတတ်အောင်ဖြစ်နေမိသည်။ 'ဟာဗျာ....အန်ကယ်ကျော်ကလည်း' 'ဒါမထူးဆန်းပါဘူးကွ...ယောက်ျားလေးဆိုတာ ဒီလိုမှပေါ့။ မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုးလိုနေရင်သာ အန်ကယ်မကြိုက် တာ။ ဟား...ဟား'
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် ဦးငယ့်ပါတနာဆိုတာကိုလည်း သတိမရတော့ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလည်းသိပ်မရှိတော့။ သွေးသား အဆူဆုံးအရွယ်နှင့် မဲမဲမြင်သမျှ ပြေးခွေ့ချင်နေသော နွားရိုင်း ပျိုကဲ့သို့ပင်...။
'အန်ကယ်ကျော်...ကျွန်တော့်ကို ချစ်နည်းသင်ပေးမယ်ဆို' ကျွန်တော်မရဲတရဲ စလိုက်၏။ အန်ကယ်ကျော်က ဘာမှမပြော သေးဘဲ အဓိပ္ပာယ်ပါသော အကြည့်ဖြင့်ကြည့်ကာ အခန်းတံခါး လော့ခ်ကို သွားချလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ရင်တွေခုန်လာသည် မှာ တဒိတ်ဒိတ်နှင့်။ အသစ်အဆန်း စတင်ကြုံရတော့မည်မ ဟုတ်လား။
'ကောင်ကလေး...ခဏစောင့်ဦး အန်ကယ်ရေသွားချိုးလိုက်ဦး မယ်' စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်သွားရသည်။ ရေချိုးဦးမတဲ့လေ။ အ၀တ် တွေကို တစ်လွှာခြင်းချွတ် တဘက်တစ်ထည်ကို ခါးမှာပတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတာ။ တင်ပါးတွေက စွင့်ကားပြီး အိစက်နေ တဲ့ပုံ။ 'ဂလု' တံတွေးများပင် မျိုချမိရတော့သည်ပေါ့။
ဇာတ်လမ်းဘက်ကို အာရုံစိုက်မိပြန်တော့ ဒီတစ်ခါ Falcon Studio ကထုတ်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်နေသည်။ သရုပ်ဆောင် တွေက ဘော်ဒီအတောင့်စားကြီးတွေ ခဏနေကကြည့်တဲ့ Bel Ami ကလိုမဟုတ်။ အား...ဒီတစ်ခါနောက်က အပေါက်ကို လျှာဖျား လေးနဲ့ကလိနေတာ။ ဘယ်လိုဖီးလ်ရှိလည်း မသိ အလျှက်ခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကတော့ တရှီး...ရှီးနဲ့ ကော့ကော့ တက်နေတာ။
ရေချိုးခန်းတံခါးသံမကြားရဘဲ ခေါင်းလျှောက်ရည်နံ့ သင်းသင်း လေးရတော့မှ အန်ကယ်ကျော်ရောက်နေမှန်း သတိထားမိတော့ သည်။ သူ့ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော့် ပေါင်ကြားက သံချောင်းကို စိုက်ကြည့်နေတာမို့ မျက်နှာပူက နဲဖြစ်သွားရသည်။
သူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် ပတ်ထားသော ရေချိုးခန်းတဘက်သည် လျော့တိလျော့ရဲ။ ဘော်ဒီက တော်တော်ကိုလှသည်။ဇာတ်ကား ထဲက သရုပ်ဆောင်တွေလောက်မထွားပေမဲ့ လို့ပြောရမည် လားမသိ တော်တော်ဖြစ်သည်ပဲ။ သူ့ပေါင်ကြားတွင် ကျွန်တော့် လိုပဲ ထောင်မတ်နေသော လှံတံတစ်ချောင်းက မတ်မတ်ထောင် လျှက်။
အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ရှိ သော ကုတင်စောင်းတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီးလျှင် ကျွန်တော့်အား ဒူးထောက်ထိုင်ရန် ပါးစပ်ကမပြောဘဲ မျက်ရိပ်ပြလေသည်။ ကျွန်တော်သည် အိပ်မက်ထဲတွင် လမ်းလျှောက်နေရသူပမာ အန်ကယ်ကျော်ခိုင်းသမျှကို တသွေမတိမ်းလိုက်လုပ်နေမိ၏။ ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် ကုတင်စောင်းတွင် ထွားကျိုင်းသောပေါင်တံ အစုံအား ကားကာ အမွှေးနုလိမ်ကောက်ကောက်ကလေးများ ဖုံးနေသော ရွှေငှက်ပျောသီးကို ရှေ့သို့အနည်းငယ်ကော့ကာ ထိုင်နေသော အန်ကယ်ကျော်ပေါင်ကြား၌ ကျွန်တော်ဝင် ထိုင်လိုက်မိ၏။ အန်ကယ့်ရွှေငှက်ပျောသီးသည် ကျွန်တော့် နှာခေါင်းဝနှင့် လက်မအနည်း ငယ်မျှသာ ကွာတော့သည်။ ညှီစို့စို့ မွှေးအီအီအနံ့သည် ကျွန်တော့်နှာခေါင်းဝသို့တိုးဝင်လာ လေသည်။ အန်ကယ်သည် ကျွန်တော်၏ ခေါင်းကို ငြင်သာစွာ ကိုင်လျှက်ဆံပင်တို့အား ထိုးဖွပေးနေလေသည်။
၄င်းနောက် အန်ကယ်ကျော်က ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို သူ၏ရွှေငှက်ပျောသီးစီသို့ ဆွဲယူလိုက်လေသလား၊ ကျွန်တော်ကပဲ မျက်နှာအပ်လိုက်လေသလားမသိ ကျွန်တော် သတိထားမိချိန်တွင် အန်ကယ်ကျော်၏ ငှက်ပျောသီးအား လျှာ ဖျားလေးနဲ့ တို့ကာ တို့ကာ မျှော့သွေးစမ်းမိတော့သည်ပဲ။ တဖြည်းဖြည်းထောင်မတ်လာသော သူ့အချောင်းကို ဟိုကား တွေထဲကအတိုင်း စမ်းသပ်ပြုစုပေးတော့ အန်ကယ်ကျော့်ခမျာ တအင်းအင်းတအဲအဲဖြင့် အရသာအတွေ့ကြီးတွေ့နေလေ တော့သည်။
အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့ အိပ်ယာပေါ်ကို အသာမှောက် တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အသာဆွဲဖြဲရင်း အထာပေးပြန်တော့ ကျွန်တော် လည်း တတ်သိပညာမနေသာဆိုသလို လျှာဖျား လေးကို ထိုးထိုးကျွေးရင်း တစ်ခါတစ်ခါ ကလော်လိုက်ရင်း ပညာကုန်ပြတော့သည်။
'အား....အ...အ တော်တော့ အရမ်းကို မရိုးမရွဖြစ်နေပြီ ခု လောက် နှူးရ၊ စုပ်ရရင် တော်ရောပေါ့ကွာ...ဒီမှာ အန်ကန် ကျော် ခံချင်လှပြီ။'
အန်ကယ်ကျော့်စကားသံကြားမှ ကျွန်တော်သတိဝင်လာလေ တော့၏။ ထိုစဉ်အခါက မိန်းမတစ်ယောက် ခံချင်လာအောင် နှူးနှပ် တတ်ပေမယ့် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ခံချင်လာ အောင် မဆွတတ်သေးပေ။ ပန်းနုရောင် အပေါက်လေးက သန့်ရှင်းပြီး လျှက် ကောင်းကောင်းနှင့် လျှက်မိနေခြင်းသာဖြစ် ပေသည်။
'အင်..ဒါဆိုရင် အန်ကယ်ကျော်ကို သားညီဘာထပ်လုပ်ပေးရမှာ လဲ။'
'ဟာကွာ...သားညီကလည်း ခေတ်လူငယ်မဟုတ်တာကျ နေတာပဲ မင်း..ဦးငယ် အန်ကယ့်ကို ညတိုင်းလိုးသလို လိုးပေး ရမှာပေါ့ ...ရှင်းပြီလား။'
'လိုးပေးရမယ်' ကျွန်တော် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို လိုးရမယ်မှန်း ကျွန်တော်မသိသေးပေ။ ဘယ်ထဲထိုးထည့်ရမည် မသိ။
'ဘယ်လို လိုးပေးရမှာလည်း ဘယ်ထဲထိုးထည့်ရမှာလဲ။' ကျွန်တော်အန်ကယ်ကျော်ကို ပြန်မေးလိုက်သောအခါ ကျွန်တော့်အား သနားစရာ သတ္တ၀ါကိုမြင်လိုက်ရသူတစ် ယောက်ပမာ 'အင်း....မင်းကလေးကလည်း ဒုက္ခ။ ကဲ..ကိုယ် တော်ချော ကျွန်တော်မျိုးကပဲ မင်းကလေးကို ပညာကုန်သင် ပေးပါတော့မယ် ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်အိပ်တော်မူပါ။'
အန်ကယ်ကျော်ပြောသလို ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန် အိပ်ချလိုက်သောအခါ ခုတင်ခေါင်းရင်းခြင်းထဲမှ ကွန်ဒုံးအား ယူလျှက် တစ်ခုဖောက်ကာ ကျွန်တော့်ဒစ်ပေါ် အသာစွပ်ချ လိုက်သည်။ နောက်ပြီး ချောဆီများလူးပေးလိုက်ရာ ကျွန်တော့် ဒစ်သည် မိုးပေါ်သို့ထောင်မတ်လျှက် အကြောများပြိုင်းပြိုင်း ထကာ နဂိုရှိရင်းစွဲထက် နှစ်ဆခန့်ပိုကြီးနေသလို ထင်လိုက် ရသည်။
အန်ကယ်ကျော်သည် ကျွန်တော့်ပေါ်သို့တက်ကာ ကားယား ခွလျှက် ထိုင်လိုက်သည်မှာ ကျွန်တော်၏ကိုယ်လုံးကိုအုပ်မိုး လျှက် လက်နှစ်ဘက်...ဒူးခေါင်းနှစ်ဘက်ကို အားပြုလျှက် ထိုင်ပြီး သူ့အပေါက်ကို ချောဆီနည်းနည်း ထပ်စွတ်ကာ ခပ်ဖြည်းဖြည်းထိုင်ချလိုက်ရာ ကျွန်တော်၏ဒစ်ထိပ်ဖျားသည် ကျင်ကနဲ ကျင်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားလေသည်။
'အား...အား ကျင်တယ် အန်ကယ်ရ'ဟု ကျွန်တော်ညည်း တွားမိ၏။
'ကောင်းပါတယ် အန်ကယ်ရ ဒါပေမဲ့ တစ်မျိုးကြီးပဲ။'
'ဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးဦးမှာ'ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် သူ၏ လက်တွင်ကိုင်ထားသော ကျွန်တော့်ဒစ်အား သူ့အပေါက်ဝတွင် တေ့လျှက် ဆတ်ကနဲထိုင်ချလိုက်လေသည်။ လိင်ဆက်ဆံသည့် အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိသော ကျွန်တော်သည် အန်ကယ်ကျော်ရဲ့ စီးပိုင်နေသော အပေါက်အတွင်းသို့ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းဝင်သွားရ သော အရသာကိုအခုထိမမေ့နိုင်သေးပေ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ၀င် ရောက်သွားသော ကျွန်တော့်လူပျိုအသစ်စက်စက် ဒစ်ကြီးသည် တစစနှင့် အရင်းထိတိုင် ၀င်ရောက်သွားလေတော့သည်။ ထိုအခါ အန်ကယ်ကျော်သည် လှုပ်ရှားမှုသိပ်မလုပ်တော့ဘဲ ဖင်ကိုနှဲ့၍သာ ကစားနေလေသည်။
ကျွန်တော့်မှာဖော်မပြနိုင်လောက်အောင် အရသာတွေ့နေ လေတော့တာ....ကျွန်တော့်နည်းတူ အန်ကယ်ကျော်သည် လည်း မျက်စိစုံမှိတ်ကာ အဆက်မပြတ်နှဲ့ရင်း ပါးစပ်ကလည်း တဟင်းဟင်းတဟဲဟဲနှင့် အဆက်မပြတ်မြည်တမ်းနေတော့ သည်။ သူ့ရင်အုပ်ထွားထွားပေါ်က နို့သီးခေါင်းလေးကို ကိုင်၍ ကိုင်၍ဆွပေးသောအခါဝယ် အန်ကယ်ကျော်သည် ဘယ်ညာ ရိမ်းထိုးလျှက် သူ့စိတ်ကြိုက် အားကုန်ဆောင့်လေတော့သည်။
အချက်နှစ်ဆယ်လောက်ဆောင့်ပြီးချိန်မတော့ ကျွန်တော်အား မရတော့ပါ။ သူ့လိုပဲ ကျွန်တော် အပေါ်မှနေ၍ဆောင့်ချင်လာမိ သည်။ 'ကျွန်တော်လည်း ဆောင့်ဦးမယ်ဗျာ....' ကျွန်တော်အား မလိုအားမရပြောလိုက်မိရသည်။
အန်ကယ်ကျော်ကလည်း အားကျမခံ'ဒီကလည်း အောက်ကနေ အားရပါးရ ခံချင်နေတာ'လို့ပြောရင်း ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် ကျွန်တော့်ပေါ် ကားယားခွထိုင်၍ ဆောင့်ပေးနေရာမှ ဆင်းပြီး နောက် ကုတင်စောင်းတွင် လေးဘက်ထောက်ကာ သူ့တင်ပါး အစုံကို ကော့ပြီးလျှင် ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို လက်ပြန်ကိုင်၍ အပေါက်ဝကိုတေ့ပြီး 'သားညီ....အန်ကယ့်ကိုအားမနာ နဲ့နော်. .အားကုန်သာဆောင့်ချက်ပစ်လိုက် နာနာလေးသာဆောင့်ချပစ် လိုက်..'
ထိုစဉ်အခါက ကျွန်တော်သည် ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သည့်အပြင် အား အင်အပြည့်ဝဆုံးအချိန်လည်း ဖြစ်၏။ ဖင်ကိုလည်း ချဖူးစ အချိန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အသက်ကိုဝအောင်ရှူကာ ရှိသမျှ အားကိုစုစည်းလျှက်တပ်ပေးထားသော အပေါက်ဝအတွင်းသို့ အားကုန်ဆောင့်ချလိုက်လေ တော့သည်။ 'ရှီး....အားလားလား ရှီး....ဟင်းဟင်း ကောင်းလိုက်တာ သားညီရယ် အန်ကယ် ကျော်က အဲဒီလိုမျိုး ခံချင်နေတာ မင့် ဦးငယ်က ငြင်ငြင်သာ သာနဲ့ အချိန်အကြာကြီးဆွဲနေတာ ဖင်ပူတာပဲ အဖတ်တင် တယ်။ မင်းလိုမျိုး အားနဲ့ မာန်နဲ့မှကြိုက်တာ။ အရှိန်ကိုရော မေလျှော့လိုက်နဲ့နော်။....အင့်..အင့် ဆောင့်ဆောင့်' အန်ကယ် ကျော်သည် အံကြိတ်လျှက် နောက်သို့ပြန်ဆောင့်ကာ စည်းချက် ညီညီ အလိုးခံလေသည်။
ခုတင်ထက်တွင် ကျွန်တော်သည် ကိုင်စရာမရှိသဖြင့် သူ့ကိုအား ကုန်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာသည် ယိုင်၍ယိုင်၍ သွားလေသည်။ ဒါကိုသိသော အန်ကယ်ကျော်က 'သားညီ ယိုင်မသွားအောင် အန်ကယ့်ဆံပင်တွေကို နောက်ကနေ စုဆွဲ ထားလိုက် ဒါမှမြင်းစီးသလိုမျိုး ဟန်ချက်မပျက်မှာ။' သူ၏စိတ် သဘောထားကို ရှင်းရှင်းပြောပြလာတော့ ကျွန်တော်လည်း အားမနာတော့ပါ။ နောက်မှနေ၍ မြင်းဇက်ကြိုးကို စုပ်ကိုင် သကဲ့သို့ လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်လိုက်ပြီး ဇာတ်ကနဲဆောင့်ဆွဲ၍ ကျွန်တော့်ငပဲအား အရှိန်ပြင်း ထန်စွာထိုးထည့် အချက်ပေါင်း များစွာပြင်းထန်စွာ ဆောင့်နေမိတော့သည်။ ကျန်လက်တစ် ဖက်ကလည်း အန်ကယ်ကျော့်တင်ပါးအစုံ အား မြင်းနှင်တံနှင့် တို့သည့်အလား တဖြန်းဖြန်းနှင့် ရိုက်ပေးနေမိတော့သည်။ ဖြူဖွေးသော တင်ပါးအစုံမှာ ကျွန်တော်၏ လက်ငါးချောင်း ရာများ သည် အထင်းသားဖြစ်နေလေတော့သည်။
ဒါကိုနာရကောင်းမှန်းမသိသော အန်ကယ်ကျော်သည် 'နာနာ လေးရိုက်လိုက်စမ်းပါ သားညီရဲ့ ဆက်ဆောင့်လိုက်စမ်းပါဦး ဒီမှာ အန်ကယ်ကျော် ဖီးလ်အရမ်းမြင့်နေပြီ'
ကျွန်တော်အလွန်အံ့သြသွား၏။အန်ကယ်ကျော်သည် ကာမ ဆက်ဆံရာတွင် Pain Feeling ကိုအဓိကထား၏ နာကျင်မှုမှ ဖီလင် အပြည့်ယူသော လူမျိုးပင်ဖြစ်တော့သည်။
ကျွန်တော်သည် အန်ကယ်ကျော့်အပြောများကြောင့်ရော အပေး ကောင်းမှုကြောင့်ရော ညှတာမှုကင်းမဲ့စွာ ဆောင့်ချက်ကို အရှိန် မြှင့် ခါးကို စက်သေနတ်ပပစ်သလို အဆက်မပြတ် ဆောင့်မိ လေတော့သည်။
သူကလည်း အားကျမခံ ကျွန်တော့်ဆောင့်ချက်တွေကိုခံယူရင်း လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူ့ငပဲကိုဆော့ကစားနေတာကလည်း အရှိန် ပြင်း ပြင်းပေါ့။ 'အား...အား အ သားညီရယ်ကောင်းလိုက်တာ... .ရှီး' လို့ပြောကာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားရင်း အိပ်ယာပေါ်ကို မှောက်လျက် အိပ်လိုက်လေတော့သည်။ သူ့ကိုယ်ပေါ်သို့ အ လိုက်သင့်မှောက်ချလိုက်ပြီး နောက်မှနေ၍ လေးငါးဆယ်ချက် ခန့် ဆောင့်လိုက်သော အခါဝယ် ကျွန်တော့်ရွှေပြွန်မှ အရည် များသည် ရေပြွတ်နှင့်ပန်းသည့်အလား ပန်းထုတ်မိတော့သည်။ အတန်ကြာစိမ်ထားရင်း ဖင်မှ ချွတ် လိုက်ကာ ကွန်ဒုံးအားလည်း အမှိုက်ခြင်းထဲ အသာထည့်လိုက်ရတော့သည်။
အဲဒီညနေခင်းတစ်ခင်းလုံး နှစ်ဦးသားတက်ညီလက်ညီ ပြိုင်ပွဲဝင် လိုက်တာ မောပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွားကြရော။ အိပ်ယာကနိုးလာ တော့ ညနေစောင်းနေပြီ။ အန်ကယ်ကျော်နဲ့အတူ ရေမိုးချိုးပြီး ကျွန်တော့်အခန်းဘက် ခပ်သွက်သွက်ပြန်လာကာ အ၀တ်အ စားလဲရတော့ သည်။ ဦးငယ်ပြန်လာတော့မည် မဟုတ်လား။
နောက်နေ့များမှာတော့ ကျောင်းတက်လိုက်၊ အလုပ်သွားလိုက်၊ သွားစရာမရှိရင် အိမ်ကိုအချိန်မှန်ပြန်ဖြင့် ပုံမှန်လည်ပတ်ဖြစ် သည်ပဲ။ အခုတော့ ကျွန်တော်သိပြီ ယောက်ျားလေးချင်းလည်း ချစ်လို့ရသည်ဆိုခြင်းကို။ မနက်ခင်းတိုင်း ထမင်းစားပွဲမှာ သုံး ယောက်သား ထမင်းအတူစားတိုင်း ဦးငယ်က ကျွန်တော့်ကို ဂရုစိုက်သလို အန်ကယ်ကျော်ကလည်း မလစ်ဟင်းစေရ။
ကဲ..... ဘယ်လိုပါလိမ့် ကျွန်တော့်ဘ၀ဟာ ပျော်စရာများ ကောင်းရော့သလား...မုန်းစရာများလား။
စာကြွင်း ။ ။ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ သူ့တင်ပါးတွေကိုတဖြန်းဖြန်းရိုက် ဆံပင်ကိုဆောင့်ဆွဲကာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆက်ဆံပေးခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ Bottom အကိုတစ်ယောက်အားသတိတရပြန်တင်ခြင်းပါ။
Posted by Alex Aung at 10:22 PM No comments:
♥ ♡ Working Hard ♡ ♥
Hong Kong မှာနေတုန်း နာမည်လည်းကြီးသလို လူလည်းရှုပ်တဲ့ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်မှာ ဖက်ထုပ်စားရတာ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူး။ ရောင်းချတာကလည်း မြန်မ...